Nleba anya na nsogbu Othipron n'ihi arụmụka (kọlụm 457) - Rabbi Michael Avraham
Nleba anya na Othipron Dilemma n'ìhè nke arụmụka (Column 457)
Nkwupụta 80	/ L. Adar A. 03 - 03/2022/XNUMX 03 / 03 / 2022
N’ime kọlụm nke bu ụzọ ewepụtara m arụmụka dị n’etiti mụ na Devid Inọk (lee Ebe a Ndekọ) na ajụjụ ma ọ dị Chineke mkpa dị ka ndabere maka izi ezi nke omume (ma ọ bụ: Ọ na-enweghị Chineke ihe niile kwere omume). N'ime mkparịta ụka ahụ, onye nhazi (Jeremy Fogel) welitere nsogbu nke Othipron, bụ onye na ihu ya yiri ka enweghị njikọ na mkparịta ụka ahụ. Mgbe obere oge gachara, echetara m otu oke ehi 278 Ebula m nsogbu ahụ na ihe ọ pụtara maka ihe akaebe sitere na omume (ịkogide omume na Chineke). N'okwu a dị n'elu, azaghachila m ajụjụ a nkenke, ma lee, m ga-alaghachi na nke a iji dokwuo anya njikọ ya na arụmụka ya na Inọk na iji mee ka ọdịiche m mere n'ebe ahụ na na kọlụm gara aga.
Ọ dị m mkpa ikwu okwu mmalite site n'ịrịba ama na echiche nke Chineke nke m na-ekwu banyere kọlụm a abụghịzi otu ihe ahụ dị ka Chineke nke “dị nro” nke m lebara anya na kọlụm gara aga. Ụfọdụ aro m na-enye ebe a bụ mgbakwunye na-esoghị na "ihe siri ike" nke Chineke chọrọ iji mee ka iwu nke omume. M ga-alaghachi n'ebe a na njedebe nke kọlụm.
Na mkparịta ụka Plato A. Etifron A na-ajụ ajụjụ na-esonụ: Ọ̀ dị mma n'ihi na chi na-achọ ya, ka ọ bụ chi na-achọ ihe ọma n'ihi na ọ dị mma. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ajụjụ a bụ ma è nwere ebumnobi pụtara ihe ọma, ma ọ bụ na ihe na-eme ka ọ dị mma bụ mkpebi nke chi, ma n'otu aka ahụ, ha nwere ike ikpebi na omume ọ bụla ọzọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ. Ihe niile na-etinye aka na uche aka ike ha. A yiri ajụjụ nwere ike n'ezie na-e welitere n'ihe gbasara Gd, na Avi Sagi na Daniel Statman, n'akwụkwọ ha. Okpukpe na omume, Jide mkparịta ụka zuru oke banyere okwu ahụ. Nkwubi okwu ha n'ebe ahụ bụ na ọ fọrọ nke nta ka ndị Juu niile na-eche echiche na-akwado nhọrọ nke ikpeazụ. Agaghị m abanye n'ime nuances na arụmụka niile na-ebilite n'akwụkwọ dị n'elu n'ozuzu (echere m na e nwere ụfọdụ ezighi ezi na ya), m ga-ejide onwe m na nkọwa dị nkenke nke isi ihe kpatara akụkụ abụọ ahụ.
N'otu aka ahụ, nkà mmụta okpukpe anyị na-eche na Chineke bụ onye pụrụ ime ihe nile, ọ dịghịkwa edo onwe ya n'okpuru ihe ọ bụla. ọ dighi onye ọzọ ma-ọbughi Ya. O kere ụwa ma guzobe iwu na-achị n'ime ya. Ihe ọ pụtara bụ na ọ gaara ekpebie ha n’ụzọ ọ bụla ọzọ ọ gaara eche. N'ihi ya, ọ dịghị ebumnobi pụtara ihe ọma na ihe ọjọọ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na mmadụ nakweere echiche a, nkwubi okwu bụ na ọ gaghị ekwe omume ịsị na Chineke dị mma. Okwu ahụ na Chineke dị mma na-eche na ọ dị mma nke a kọwara n'agbanyeghị na ọ bụ ya, na arụmụka bụ na ọ dị mma n'etiti omume ya na ihe ndị ọ chọrọ na otu ihe ebumnobi maka ịdị mma. Ma ọ bụrụ na ọ bụ mkpebi ya na-akọwa echiche nke ezi ihe, mgbe ahụ nkwupụta na Chineke dị mma abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị nkọwa tautological (ma ọ bụ usoro nyocha) ọ bụghị arụmụka. N'ụzọ bụ́ isi, ọ pụtara: Chineke chọrọ ihe ọ chọrọ. Ma nke a bụ eziokwu nye anyị niile.
Ọtụtụ ndị ọkà mmụta okpukpe (na ọbụna obere ịchọ ọdịmma onwe onye nanị na-esonyere ha) na-eche na nke a bụ ọnọdụ nsogbu. Chineke dị mma n'ezie, ọ pụghịkwa ịdị otú ahụ. Nke a n'ezie na-eche na ezi ihe bụ ihe kpọmkwem kọwara na Chineke n'onwe ya bụ isiokwu a nkọwa. N’ezie, o nwere ike ime ka anyị gbagwojuru anyị anya ma kpuo ìsì ka anyị ghara ịmata ọdịiche dị n’etiti ezi ihe na ihe ọjọọ, ma ọ pụghị ikpebi ihe ọma na ihe ọjọọ. Dị ka m kwuru, n'agbanyeghị ihe isi ike nke nkà mmụta okpukpe, ọ dị ka ọtụtụ ndị na-eche echiche nke ndị Juu nwere ụzọ nke abụọ.
Nghọta na nkuzi
Enwere ike ime ka echiche nke mbụ nụchaa ntakịrị, ma hazie ya dị ka ndị a: Anyị nwere echiche banyere ezi ihe na ihe ọjọọ. Arụmụka bụ na uche Chineke kwekọrọ n'otu echiche ahụ. Ma nke a ka ọ kụrụ n'uche n'ime anyị, n'ihi ya, ọ dịghị n'ezie ihe ebumnobi echiche nke ezi ihe na ihe ọjọọ. Ya mere enwere ike ikwu na nkwupụta a bụ n'ezie nkwupụta (ọ bụghị nkọwa), ma n'otu oge ahụ ọ bụ nkwupụta nke na-ekwu banyere echiche anyị ma ọ bụghị ụwa n'onwe ya. Banyere ụwa n'onwe ya, okwu ahụ bụ "Chineke dị mma" pụtara ihe ọ bụla (ọ bụ njirimara efu, tautology).
Nke a bụ ihe gbasara nsogbu nke mmekọrịta dị n'etiti pụtara na nkuzi. Inwe ihe atụ nke ndị ọkà ihe ọmụma nyocha na-ejikarị (lee eg. Ebe a), Ihe a na-ekwu: Kpakpando nke chi ọbụbọ bụ kpakpando nke mgbede. Nke a bụ ihe a na-ewere ruo oge ụfọdụ dị ka kpakpando abụọ dị iche iche (a na-ahụ otu na mgbede na nke ọzọ n'ụtụtụ), ma n'ikpeazụ anyị chọpụtara na ọ bụ otu kpakpando ahụ n'onwe ya. A na-ajụ anyị ugbu a: nkwupụta a ọ bụ nkwupụta efu ma ọ bụ nkọwa (usoro nyocha)? Ọ nwere ọdịnaya ọ bụla ma ọ bụ ọ bụ tautology efu? O doro anya na ahịrịokwu dị otú ahụ anaghị ekwu ihe ọ bụla, ebe ọ bụ njirimara dị n'etiti ihe na onwe ya. Mana uche anyị bụ na e nwere ihe ọhụrụ n’ahịrịokwu a. Ọ na-akụziri anyị ihe gbasara echiche nke anyị. Kpakpando abụọ ahụ anyị chere na ha dị iche bụ otu kpakpando n'onwe ya. Ahịrịokwu a na-agbanwe ihe ọmụma anyị banyere ụwa, n'agbanyeghị na n'ihe gbasara ọdịnaya ebumnobi ya, ọ dị ka njirimara efu.
Rịba ama na nke a bụ ikpe maka nkwupụta njirimara ọ bụla nke ụdị: a bụ b. N'iche na nkwupụta a ziri ezi, mgbe ahụ ọ pụtara n'ezie: a bụ a, ya bụ tautology efu. Ngwọta nyocha maka nsogbu nke ihe nkwuputa njirimara pụtara bụ ọdịiche dị n'etiti ihe pụtara na nkuzi. Ndị ọkà ihe ọmụma nyocha (na-eso Frege) na-ekwu na dịka njirimara dị otú ahụ si dị, ọ pụtara ma ọ bụghị ntụziaka (ma ọ bụ agba). O nwere ihe ọ pụtara nke na-abụghị ihe efu ma ọ bụ ihe na-abaghị uru nye anyị, ma ọ bụrụ na i leba anya n'ihe ọ na-arụtụ aka n'ụwa, ọ bụ ihe na-achọghị njirimara.
Anyị nwere ike ịlaghachi na nsogbu Othipron. N’akụkụ Chineke na-akọwa ezi ihe na ihe ọjọọ, a pụrụ ịrụ ụka na okwu ahụ bụ́ na ọ dị mma nwere ihe ọ pụtara ma ọ bụghị ntụziaka. N'ihe banyere nkuzi ya (agba) ọ bụ ihe efu ebe ọ dị mma site na nkọwa nke ọma. Ihe niile ọ ga-eme ga-ahapụ ya n'okpuru nkọwa nke ihe ọma, ya mere Amira bụ onye dị mma bụ ihe efu nke ọdịnaya (analytical).
Ma ọ na-esiri m ike ịnakwere ọbụna okwu dị nro a. Mmetụta dị mfe bụ na Chineke kwesiri ịdị mma n'ezie, nke pụtara na nzọrọ na ọ dị mma abụghị nkọwa efu kama nzọrọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị otú ahụ, ọ gaghị enwe uru itinye aka n’ịdị mma nke Chineke, a gaghị ajụkwa ajụjụ banyere ya site n’omume ndị yiri omume rụrụ arụ n’anya anyị (dị ka agbụ Aịzik, ibibi Amalek, na ihe ndị na-ezighị ezi. dị ka). Okwesiri ighota na oburu na akowa ihe Chineke choro dika ihe di nma mgbe ahu odigh ohere inwe obi abua nke omume banyere ya. O nyere iwu ka o soro Aịzik, ya mere njide nke Aịzik bụ ihe dị mma. Mmetụta dị ka a ga-asị na e nwere nghọtahie n'ebe a n'etiti iwu Chineke na omume na-arụtụ aka na mmalite anyị na Chineke dị mma. Dị nnọọ ka ịdị adị nke ụkpụrụ omume arụmụka na-egosi objectivity nke ụkpụrụ ọma (ma ọ bụghị a ga-enwe ihe ọ bụla na-arụrịta ụka banyere) na ịdị adị nke ụkpụrụ nka nka na-egosi objectivity nke ụkpụrụ omume eziokwu (ma ọ bụghị na ọ dịghị ohere maka nkatọ nke unethical àgwà na). omume).
Nkwubi okwu bụ na nghọta okpukpe dị mfe na-akụziri anyị dị ka akụkụ nke ọzọ nke nsogbu Othipron na ezi ihe bụ ezi uche na ike kọwapụtara ọbụna site na Chineke. Ya bụ, Chineke chọrọ ihe n’ihi na ha dị mma, ọ bụghịkwa n’ụzọ ọzọ. Naanị n'ụzọ dị otú a nwere ike ịrụ ụka na ọ dị mma, ma na-akatọkwa ya (ma ọ bụ chọọ nkọwa) maka ihe omume rụrụ arụ. Mana dị ka anyị hụworo na ụzọ a na-ebuli ihe isi ike dị iche, m ga-aga n'ihu ugbu a ilebara ya anya.
N'etiti iwu nke physics na "iwu" nke mgbagha
Ụzọ a na-ewelite ihe isi ike nke nkà mmụta okpukpe dị iche. Olee otú ọ ga-esi kwe omume na Chineke, bụ́ onye kere ihe niile na ihe niile e ji ike ya mee, ka nọ n’okpuru iwu ndị dị n’èzí nke ọ na-ewepụtaghị? Iji ghọta nke a, anyị ga-alaghachi na ọdịiche m mere ebe a n'oge gara aga n'etiti ụdị iwu abụọ (lee dịka ọmụmaatụ kọlụm. 278). N'ezie, Chineke anọghị n'okpuru iwu nke physics, n'ihi na ọ bụ ya kere ha, na ọnụ nke machibidoro bụ ọnụ nke kwere. Ọ na-adịghị n'okpuru iwu nke ala N'ezie (ma ọ bụrụ na naanị n'ihi na ọ bụghị nwa amaala nke ya). Ma n'aka nke ọzọ ọ bụ maa "n'okpuru" iwu nke mgbagha. Iwu nke mgbagha bụ "amanye" na Chineke. O nweghi ike ime triangle okirikiri ma ọ bụ si na mgbagha pụọ, naanị n'ihi na ọ nweghị ihe dịka triangle gburugburu na ọ dịghị anụmanụ dị otú ahụ na-esi n'echiche. Triangle site na nkọwapụta abụghị okirikiri. Nke a abụghị n'ihi iwu ọ bụla etinyere na triangle n'ihi mkpa ọ dị, kama site na ọdịdị ya. Site na nkọwa ya dị ka triangle ọ na-esote na ọ bụghị okirikiri na enweghị ike ịbụ okirikiri. Ya mere enweghị ike imepụta triangle gburugburu abụghị n'ihi mmachi mpụga nke etinyere na Gd, ya mere ọ bụghịkwa oke n'ikike ya niile, ma ọ bụ mwepu dị na ya.
Ihe niile e kere eke nwere ike ime ihe niile a pụrụ ichetụ n'echiche ọbụna n'echiche. Mana triangle gburugburu bụ echiche efu. Ọ dịghị ihe dị otú ahụ na ọ bụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche. Ya mere, enweghi ike Chineke kee ihe di otua abugh ihe ojoo n'ikike Ya. Were ya na mmadụ na-ajụ gị ma Chineke nwere ike ịme triangle gburugburu. M ga-arịọ ya ka o buru ụzọ kọwaara m echiche a na mgbe ahụ enwere m ike ịza ya. O doro anya na ọ gaghị enwe ike ịkọwa ya (ọ nwere akụkụ dị nkọ ma ọ bụ na ọ bụghị? Gịnị bụ nchikota nke akụkụ ya? Ihe niile dị na ya hà nhata anya site na ebe ahụ?), Ya mere, ajụjụ a na-egosipụta onwe ya.
Dị ka m kọwara n'ebe ahụ, ihe na-akpata mgbagwoju anya bụ okwu ahụ bụ "iwu," nke e ji mee ihe n'akụkụ abụọ a n'echiche dị iche. Iwu physics bụ iwu Chineke wetara n'ụdị okike. Iwu a bụ mkpebi ya ịmepụta otu ọdịdị maka ụwa nke o kere site n'ọtụtụ dị iche iche. Ọ pụkwara ịmepụta iwu ndị ọzọ nke okike. N'ụzọ dị iche, iwu nke mgbagha abụghị iwu n'otu ụzọ ahụ. A na-agbaziri iji okwu ahụ bụ "iwu" n'ụzọ ezi uche dị na ya. Ọ bụ naanị nkọwa nke ihe ọ bụghị ihe dị n'èzí ka a na-amanye ha. Triangle abụghị gburugburu ma ọ bụ n'ihi na mmadụ amachibidoro ya ma ọ bụ n'ihi na amachibidoro ya. Site na ịbụ triangle ọ bụghị okirikiri. Ya mere, o zighị ezi ikwu ebe a na Chineke họọrọ otu usoro ezi uche n'ime ọtụtụ usoro enwere ike. Enweghị usoro ezi uche ọzọ. Site ugbu a gaa n'ihu n'ọnọdụ yiri nke iwu nke mgbagha, m ga-eji okwu ahụ bụ "iwu" mee ihe na akara ngụ.
Ọnọdụ nke iwu nke omume
Ajụjụ na-ebilite ugbu a bụ ọnọdụ nke iwu gbasara omume: Iwu ndị a ọ bụ n'echiche nke iwu physics, ka ọ bụ "iwu" n'echiche nke "iwu" nke mgbagha? Ndị na-akwado akụkụ mbụ nke nsogbu Othipron kwenyere na iwu nke omume dị ka iwu nke physics, ya mere ọ bụ Chineke na-ekpebi ma kọwaa ha. Akụkụ nke ọzọ nke nsogbu ahụ, n'aka nke ọzọ, na-eche na "iwu" nke omume dị ka "iwu" nke mgbagha (ndị a bụ "iwu" ọ bụghị iwu), ya mere a na-amanye Chineke. Ọ pụghị ịmepụta usoro iwu omume dị iche. Dị ka ihe atụ, ọ pụghị ịmepụta ụwa nke ụkpụrụ omume ọzọ ga-adị n'ime ya (na igbu mmadụ ma ọ bụ imekpa mmadụ ahụ́ ga-enwe omume ọma). Omume sitere na nkọwa machibido igbu ọchụ.
Ọ nwere ike ịmepụta ụwa ebe ndị mmadụ ga-anụ ụtọ mmekpa ahụ (ọ ga-abụ ihe ziri ezi n'ụwa dị otú ahụ ịkpọ ha "mmekpa ahụ"?), Mgbe ahụ, ọ gaghị enwe nsogbu omume n'ịkpata nhụjuanya. Ma ebe ịkpata nhụjuanya adịghị njọ. Ise ndị mmadụ ihe bụ ihe ọjọọ n'ụwa ọ bụla enwere ike. Ọ bụ banyere ụwa dị iche n'ezie, ya bụ, ụwa ebe nhụjuanya na-adịghị akpata mwute. Mmadụ nwekwara ike iche echiche banyere ụwa ebe a kọwara njakịrị ndị mmadụ dị ka ihe ọma, ma ọ bụghị ụwa nwere omume dị iche kama ọ bụ ụwa ebe ndị mmadụ na-ekpu ìsì n'iwu nke omume (nakwa Chineke kere ya abụghị omume. ). Ị nwere ike ịgbanwe oke ọ bụla na ọdịdị nke ụwa wee mepụta ụwa dị iche ebe ọ ga-adị iche. Ma nyere ọdịdị nke ụwa ahụ kpọmkwem, iwu nke omume na-esite na ha n'enweghị mgbagha (a na-amanye anyị). Ọ dị m ka nke a bụ ihe na-adabere na nkwupụta a maara nke ọma nke Ramchal, "àgwà ọma ime ihe ọma." Gd site na okike kwesiri ime ihe oma. O nweghị nhọrọ ọzọ (a na-amanye ya).
Nke a putara na nkwuputa "igbu mmadu di njo" bu ihe nleba anya dika iwu nke nemegide. Ọ bụ ezie na nke a bụ eziokwu ziri ezi, ọ bụghị ihe dị mkpa (mana ọ dị mkpa). Ya mere ọ dịghị ihe mgbochi na-ekwu na ọ na-amanye (ma ọ bụ kama: "amanye") na Chineke, dị nnọọ ka mgbagha na-"amanye" na ya. Nke a dị iche na iwu okike dịka ọmụmaatụ. Were dị ka ihe atụ na-azọrọ nke iwu nke ike ndọda: ihe ọ bụla abụọ ihe na uka na-adọta ibe ha site a ike nke nhata ngwaahịa nke uka na inversely hà nhata na square nke anya n'etiti ha. Nke a abụghị nkwupụta nyocha, ọ pụkwara ịbụ ụgha. Enwere ike inwe ụwa ebe iwu nke ike ndọda ga-adị iche (dịka ike nke dabara na anya na nke atọ). Ya mere, iwu dị otú ahụ na-arara Chineke nye, na naanị mkpebi nke ya ekpebiwo ọdịnaya ya.
Otu o si dabara na kọlụm gara aga
Na kọlụm gara aga m rụrụ ụka na ọ nweghị ezi omume ọ bụla na-enweghị Chineke. Nke a ọ́ dịghị emegide ihe m na-ekwu ebe a na a na-amanye ụkpụrụ omume n'isi Chineke na n'ihu ya, ya mere ọ bụghịkwa ihe sitere n'uche ya? O doro anya na enwere esemokwu ihu ebe a. Ugbu a aghọtara m na nke a bụ eleghị anya ihe Jeremy Fogel, onye nhazi, pụtara, bụ onye welitere nsogbu Othipron na mkparịta ụka anyị wee jụọ m echiche m banyere ya.
Na mkparịta ụka n'onwe ya, a kọwara m nkenke na m na-ama ọdịiche dị n'etiti nkọwa nke ihe ọma na ihe ọjọọ na ntinye anyị na ha. The definition nke ọma na ihe ọjọọ na-amanye na Chineke na-apụghị ịbụ n'ụzọ ọzọ. Ọbụna ọ pụghị ikpebi na igbu ọchụ dị mma, ma ọ bụ na-enyere ndị ọzọ aka ọjọọ. Ma nkwa ime ihe ọma na izere ihe ọjọọ adịghị adị ma Chineke anọghị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, iwu iwu na-ekwu na igbu ọchụ bụ ihe a machibidoro iwu, nke pụtara na e nwere ihe jikọrọ ya na ụkpụrụ omume nke mmachibido iwu igbu ọchụ, adịghị amanye na Chineke. O sitere n’iwu-Ya we me ya.
N'ilaghachi n'echiche nke 'ezi omume', anyị nwere ike itinye ya n'ụzọ dị otú a: ha nwere ike ịdị adị n'onwe ha, dịka David Inọk na-ekwu (ya bụ na ọ bụghị Chineke kere ha), ma dịka m na-arụrịta ụka megide ya ọbụna ma ọ bụrụ na ha dị ma tinye ya n'ime ya. ụfọdụ akụkụ nke ụwa echiche (bụ), Ọ ka na-apụghị adịgide adịgide na m (kwesịrị). M ga-ekwu na na mbụ na kọlụm m ọdịiche dị n'etiti ajụjụ nke onye kere ụkpụrụ omume (nke Inọk na-emeso) na ajụjụ nke onye na-enye ha irè (nke m mere). Ihe m kọwapụtara ebe a bụ na ọ bụ ezie na Chineke ekeghị eziokwu gbasara ụkpụrụ (a na-amanye ha), ọ bụ naanị iwu Ya nwere ike inye ha ike.
Mmadụ nwere ike jụọ ugbu a gịnị na-amanye Chineke n'onwe ya n'omume? Ọ bụrụ na ọ dị mma, ya onwe ya kwesịkwara itinye aka n'omume (na usoro ya). Ọ̀ bu ihe nke aka Ya nyere n'iwu ka ejiworo ke ya ab͕u? Nke a dị nnọọ iju, na n'ezie na-emegidekwa m na-ekwu site na kọlụm gara aga na a chọrọ ihe mpụga nke ga-enye de Dicto nkwado iwu.
Echere m na ọ ga-abụ ihe ziri ezi ikwu na Chineke adịghị etinye aka na omume, kama ọ na-ahọrọ ya. Ọ naghị ahọrọ ihe omume bụ (n'ihi na ọ bụ ọnụ ọgụgụ zuru oke na nke siri ike nke na-adịghị n'aka ya) kama ọ na-ahọrọ ime ihe na-atọ ụtọ na ịchọ n'aka ndị o kere eke omume omume. Nke a yiri ihe m na-ekwu na kọlụm gara aga kwupụta Ari Alon, na mmadụ nwere ike inye onwe ya iwu ma ọ ga-abụ omume ma ọ bụ na ọ bụghị, ma ọ pụghị ịhazi iwu nke omume onwe ha (akọwapụta ihe dị mma na ihe ọjọọ). Ọ bụrụ otú ahụ, ma mmadụ ma Chineke bụ ndị e ji n’aka iwu nke omume. Nkọwa nke ezi ihe na ihe ọjọọ na-amanye ha ma enyeghị ha. Ma Chineke nwere ike inye iwu iwu ma si otú a nye nkọwa ndị a na-ejikọta ike n'ebe anyị nọ, ma mmadụ enweghị ike ime nke ahụ.
Aga m etinye ọkwa ọzọ na onyonyo a. O siri ike ikwu okwu banyere nwa oge aga n'ihu nke eziokwu ziri ezi (nkọwa nke ezi ihe na ihe ọjọọ) nye Chineke, ebe ọ bụ na ọ dị adị mgbe niile. Tupu ya enwee ihe ọ bụla n'ihi na ọ dịghị oge n'ihu ya. Ọ dịghị ma ọ pụghị ịbụ ụwa, ọbụna ihe pụrụ ichetụ n'echiche, nke Chineke adịghị adị. Ma n'ụzọ doro anya, a pụrụ inwe ụwa ebe Chineke enyeghị iwu ka e mee omume (ọ gwụla ma anyị chere na ọdịdị ya dị mma na-amanye ya ime ihe ọma na-achọ uru). Rịba ama na anyị amụtala ugbu a na omume na-ebute iwu Chineke ụzọ, ma ọ bụghị Chineke. Ọ bụ maka ọganihu nwa oge. Mana n'otu aka ahụ, enwekwara nnukwu n'ihu.
Ihe ndị bụ́ eziokwu adabereghị n’iwu Chineke, ha abụghịkwa ọrụ Chineke. Ma nzọrọ ahụ bụ́ na omume ọma dị ọbụna ma e wezụga Chineke enweghị ihe ọ pụtara. N'ịbụ ndị na-eche na Chineke bụ onye ịdị adị ya dị mkpa (na ebe a ka m na-ekwu banyere Chineke okpukpe, ọ bụghịkwa "na-adabere" site na kọlụm gara aga), mgbe ahụ ọ gaghị ekwe omume ikwu maka eziokwu nke enwere ịdị adị dị mkpa. nke ahụ adịghị adị. Ya mere ọ bụrụgodị na ụkpụrụ omume (ma ọ bụ eziokwu ziri ezi) dị n'enweghị iwu, a pụghị ikwu na ọ dị na-enweghị Chineke. Ọ bụ ezie na ọ bụrụgodị na ha abụọ dị n’otu n’otu, eziokwu ụkpụrụ omume ahụ adabereghị n’ebe Chineke nọ.
Ma ugbu a, anyị nwere ike ịbịarute na nkọwa dịtụ iche: eziokwu omume bụ ọkpụkpụ nke Chineke onwe ya (ọ bụ n'ụzọ nkịtị "ezi ọdịdị ime ihe ọma" n'ụzọ nkịtị), ha dị ka ọ dị, na dị ka ọ bụchaghị adị na mgbe niile. ha na-adịchaghị adị na mgbe niile. Ma ha ndaba abụghị na-adịgide adịgide ma ọ bụ dị mkpa. Ha enweghị ike ijide onwe ha n'enyeghị ha iwu ime otú ahụ.
N'etiti ijere Chineke ozi na Asha arụghị ọrụ
Na mmeghe nke kọlụm m siri ọnwụ na echiche nke Chineke a tụlere na kọlụm a abụghị "Chineke dabere" site na kọlụm gara aga (Chineke chọrọ inye nkwado maka iwu omume na eziokwu ziri ezi). Ị ga-aghọta nke a ma ị tụleghachi ọzọ aro dị iche iche gbagoro ebe a banyere eziokwu ahụ bụ́ na ọ dị mkpa na-adị mgbe nile, na banyere eziokwu ahụ bụ́ na ụkpụrụ omume bụ́ eleghị anya akụkụ nke ikike ya nakwa na ọ bụ ihe e bu pụta ụwa ime ihe ọma. na ndị ọzọ. Ihe ndị a bụ ihe mgbakwunye niile nke “na-eme” ntakịrị “abụba” “ihe dị gịrịgịrị” na ihe dị ntakịrị nke m mesoro na kọlụm gara aga.
Nke a bụ n'ihi na mkparịta ụka dị na kọlụm dị ugbu a na-ewere ọnọdụ kpamkpam n'ụdị nkà mmụta okpukpe, ọ bụghị naanị nke meta-ethical. N'ezie, nsogbu Othipron n'onwe ya bụ nke gbasara nkà mmụta okpukpe. Na-enweghị nkà mmụta okpukpe, ọ gaghị abụ nsogbu ikwu na Chineke na-akọwa iwu nke omume (n'ihi na ọ dịghị mkpa iche na nkwupụta na ọ dị mma bụ arụmụka banyere ya ma ọ bụghị nkọwa), mgbe ahụ nsogbu ahụ agaghị enwe. e kere. Tụkwasị na nke ahụ, na ọnụ ọgụgụ nkà ihe ọmụma, ọ dịghịkwa ihe megidere okwu m na kọlụm gara aga. Ọ bụrụ na Chineke na-akọwa ihe ọma na ihe ọjọọ (ezi omume ziri ezi) mgbe ahụ, ọ dabara n'ụzọ zuru oke na ihe m rụrụ ụka na mbụ na kọlụm, na ọ dịghị mkpa maka a dum kọlụm. Ebumnobi m ebe a bụ ka m na-emekọrịta ihe m na-ekwu na ụkpụrụ omume meta nke sitere na kọlụm gara aga na Chineke nke ụgbọ elu nkà mmụta okpukpe (Juu-Christian) onye echiche ya bụ na ọ dị mma. Nke a bụ mkparịta ụka gbasara nkà mmụta okpukpe doro anya (ọ bụghịkwa usoro ụkpụrụ meta).
Nsogbu Othipron gbasara ụkpụrụ okpukpere chi
Ọtụtụ ugboro n'oge gara aga egosila m ọdịiche dị n'etiti ụkpụrụ okpukpe na ụkpụrụ omume (lee ihe atụ otu kọlụm. 15, Mmalite nke akwụkwọ m Na-eje ije n'etiti nguzo Na ọtụtụ ndị ọzọ). Ihe ngwọta m na-atụ aro na esemokwu dị n'etiti halakhah na omume dị n'eziokwu bụ na ndị a bụ usoro uru abụọ nwere onwe ha. Enwere ike itinye iwu X nke ọma (n'ihi na ọ na-akwalite uru okpukpe A), mana n'otu oge ahụ amachibidoro omume (n'ihi na ọ na-emebi ụkpụrụ omume B). Ụkpụrụ okpukpe bụ omume rụrụ arụ, na mgbe ụfọdụ, ha nwere ike iguzo n'ụzọ dị nnọọ iche na ụkpụrụ omume na mgbe ụfọdụ naanị n'ọnọdụ esemokwu (mgbe esemokwu na-ebilite naanị n'ọnọdụ ụfọdụ). Arụmụka m bụ na ọ dịghị ihe mgbochi dị otú ahụ na-emegiderịta onwe ya, na n'ezie ọ ka mma ịsị na ndị a abụghị ihe mgbagwoju anya (ọ dịghị ihe isi ike na ọkwa usoro ihe omume na ọnọdụ ndị dị otú ahụ), ma esemokwu (ọ na-esiri ike ikpebi ihe ị ga-eme). mee na ọkwa bara uru).
Mgbe nke a gasịrị, Tirgitz jụrụ ajụjụ a (bAkwughachi Na kọlụm gara aga):
Nke a pụtara na na kọlụm na-esote, ị ga-ekwukwa banyere euphron banyere ụkpụrụ okpukpe na ụkpụrụ ndị ọzọ, nke n'echiche gị bụ ụkpụrụ nke Gd na-ahapụ onwe ya ka ọ wepụ ọrụ omume ọ bụla. Ma nke a pụtara na ọ bụ ezie na Chineke etinyeghị onwe ya n'ike aka ike.
M ga-akọwa ajụjụ ya. Dịka usoro m siri dị, Chineke nyere anyị iwu ka anyị nwee iwu megidere omume iji kwalite ụkpụrụ okpukpe. Ọ bụrụ otú ahụ, Tirgitz na-arụ ụka, o yiri ka a na-amanyekwa ụkpụrụ okpukpe na ya ma ọ bụghị n'ihi ọchịchọ aka ike ya (iwu ọchịchị ya). Ọ bụrụ na iwu ndị ahụ abụghị “eziokwu halak” nke etinyere n’elu Chineke kama ọ bụ iwu ya kere ya, yabụ na ọ gaara etinye ha n’ụzọ dị iche. N'ọnọdụ dị otú a, m ga-atụ anya na ọ bụrụ na ọ chọrọ (ma ketara) ime ihe ọma na ọ gaghị ewepụta iwu ndị megidere omume ọma. Ịdị adị nke esemokwu na-egosi na a na-amanye iwu nke halakhah (ma ọ bụ ụkpụrụ okpukpe, nke otu iwu nke halakhah na-akwalite) na Gd, ya mere a na-ejide ya (ma ọ bụ na-emegbu anyị) n'ihi mkpa ọ dị na esemokwu ndị a.
Nke a bụ nnukwu ajụjụ, echere m na o ziri ezi. Dịka enwere eziokwu gbasara ụkpụrụ, enwekwara eziokwu halak. Ndị a na ndị ahụ adabereghị na Chineke ma na-amanye ya. Na mmalite nke akwụkwọ nke atọ na trilogy m na-achọ ịtụnyere foto Kantian nke omume omume dị ka ịsọpụrụ usoro nhazi ahụ na foto halakhic m na-enye ime mitzvah dị ka ịkwanyere ntinye aka n'iwu ahụ. N'ebe a, anyị na-ahụ na ntụnyere a na-aga n'ihu.
Nke a na-ewetara m ajụjụ ọzọ Tirgitz jụrụ, nke a jụrụ ụbọchị ole na ole gara aga (lee mkparịta ụka na-atụgharị na eri Ebe a). N'ihe gbasara omume, ọ bụ ihe a na-eche na n'ọnọdụ esemokwu dị n'etiti ụkpụrụ, ọ bụrụgodị na m nwere ikike ime X na ịgafe Y, a ka nwere nsogbu nke m gafere Y. Ekwesịrị m inwe mwute ma ọ bụ mwute maka ya. imerụ mmadụ ahụ́ ma ọ bụ ime omume rụrụ arụ, ọ bụrụgodị na m ga-eme nke a. Tirgitz jụrụ ma iru uju dị otú ahụ kwesịkwara ịpụta na ọnọdụ halakhic (Q.)kwuru: "Mwute gị na mwute maka m"). Ya bụ, m ga-akwa ụta na n’ihi na m na-aga agha, anaghị m agbaji lulav (ma ọ bụ n’ihi na m na-arịa ọrịa, anaghị m ebu ọnụ na Yom Kippur), dị nnọọ ka m na-akwa ụta na n’ihi na m gara agha, aghaghị m igbu m. ndị mmadụ (na mgbe ụfọdụ ndị nkịtị kwa). Na nkenke, ajụjụ ya bụ ma è nwere ọdịiche dị n'etiti halakhah na omume n'okwu a.
M zara ya n'ebe ahụ na m na-eche na e nwere ọdịiche dị n'etiti ihe ndị gbara ya gburugburu: na ụkpụrụ omume ọbụna ma ọ bụrụ na ụfọdụ uru a jụrụ n'ihu nke ọzọ uru, m ka ga-enwe mwute ma ọ bụ dissonance maka ịgafe jụrụ uru (M merụrụ mmadụ) . N'aka nke ọzọ, na halakhah ma ọ bụrụ na ọ dịghị ọrụ na m mere ihe dịịrị m na ọ dịghị ihe mere m ga-eji akwa ụta ihe m na-emezughị. O kwere omume n'ụzọ zuru oke ma ọ dịghị onye ọ bụla na-emerụ ahụ.
Ma nke a dị iche iche na-eche na na halakhah e nwere nanị iwu na mgbe ọ dịghị iwu ọ dịghị ihe mere. Ma n'ìhè nke foto na-apụta ebe a, ọ dị m mkpa ịlaghachi n'onwe m site na nke a. Ọ bụrụ na anyị na-eche na iwu halak bịara iji kwalite ụkpụrụ okpukpe, mgbe ahụ ọ bụrụgodị na m mebiri halakhah n'ụzọ ziri ezi (n'ihi na halakhah ọzọ jụrụ ya), ka ihe na ụwa ime mmụọ e merụrụ site na ya (m mere megidere halak nke eziokwu na wetara mmerụ ahụ nke mmụọ). Ọ dị ka foto m gosipụtara n'ebe a na-egosi na ọ nweghị ọdịiche dị n'etiti halakhah na omume n'okwu a.
Ọ bụ ezie na n'echiche ọzọ enwere ike ịrụ ụka na na tiori ma ọ bụrụ na m mere ihe kwere ka a zerekwa mmebi ime mmụọ (lee. Akụkọ Na citric acid na Ememme Ngabiga, ebe m wetara isi mmalite na-ede otú). Enwere ike ịsị na Gd na-arụ ọrụ ebube ma na-egbochi mmebi ahụ ka onye ezi omume dị ka m nke na-ekwesị ntụkwasị obi n'iwu agaghị enwe mmekpa ahụ. Nke a n'ezie adịghị eme na ụgbọ elu omume. N'ebe ahụ ọ bụrụgodị na m ga-emebi ụkpụrụ omume, mmebi ahụ bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Ihe dị iche na-esite n'eziokwu ahụ bụ na n'ọnọdụ omume ndị a bụ eziokwu anụ ahụ na n'ọnọdụ halakhic ndị a bụ eziokwu ime mmụọ. Chineke anaghị agbanwe physics n'ihi na ọ naghị etinye aka na omume nke ụwa nkịtị, ma ọ na-agbanwe eziokwu nke mmụọ (n'ihi na ụwa ime mmụọ ọ na-etinye aka na ya. Ọ naghị eduzi ya).. Ọ dị mkpa iburu n'obi na ọ bụ ezie na anyị ahụla eziokwu gbasara ụkpụrụ abụghị eziokwu nkịtị, ha na-adabere na eziokwu anụ ahụ (mmerụ ahụ ma ọ bụ nhụjuanya nye mmadụ dịka ọmụmaatụ). Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m zuru ego n'aka mmadụ iji zọpụta ndụ, mgbe ahụ ọ bụrụgodị na a kwadoro ya ma eleghị anya ọbụna mitzvah, mmebi nke onye ohi ahụ mere na ọ dịghị ihe mere ọ ga-eji akwa ụta (ebe a ọ gaghị eme ọrụ ebube na Chineke. ga-enyeghachi ya ego ahụ).
Ihe ọ pụtara ga-abụ maka ikpe dịka m kọwara na kọlụm gara aga, ebe usoro nhazi na-agwa m na agaghị m eme X n'agbanyeghị na ọ nweghị nsonaazụ ọjọọ. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ ọ dị ka ọ bụrụ na a jụrụ ihe ahụ maka uru ọzọ ọ dịghị ihe ọ bụla ga-akwa ụta. Nke a yiri ọnọdụ na mpaghara halakhic. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m ebuliri otu puku ụtụ NIS iji zọpụta ndụ mmadụ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, enweghị m ihe ọ bụla m ga-akwa ụta maka ịpụnarị ụtụ isi n'ihi na ọ dịghị ihe na-adịghị mma (m kọwara nke a na kọlụm gara aga). N'ofè nsogbu N'ihi na-adịghị adị, ihe bụ ebe a bụ nanị mmebi nke categorical iji, ma nke a n'ezie e ziri ezi na ọnọdụ ndị a. N'ezie, ọ bụ ihe ziri ezi karị ịsị na emebighị m usoro nhazi ọ bụla n'ọnọdụ dị otú ahụ. Iwu izugbe kwuru na onye ọ bụla kwesịrị ịgbanarị ụtụ isi iji chekwaa ndụ.
 Na kọlụm gara aga, akọwara m ihe kpatara na iwu nke esemokwu dị ka nkwupụta ezi uche-nyocha anaghị achọ ihe ziri ezi. Nke a bụ otu echiche site n'akụkụ dịtụ iche.
 Chee echiche banyere ajụjụ ma Chineke ọ̀ ga-eke mgbidi nke na-eguzogide mgbọ nile nakwa mgbọ nke na-abanye n’ime mgbidi ahụ nile. Azịza nke a bụ ihe na-adịghị mma n'ezie, n'ihi na ọ bụrụ na bọọlụ o kere na-abanye n'ime mgbidi niile mgbe ahụ ọ dịghị mgbidi na-eguzogide ya, ya mere ọ dịghị mgbidi na-eguzogide bọọlụ niile, na nke ọzọ. Enweghị ike Chineke ịmepụta ihe abụọ dị otú ahụ n'otu oge adịghị emebi ikike ya. Naanị na ọkwa ezi uche dị na ya enweghị eziokwu dị otú ahụ. Lee Ebe a Mmetụta maka nkume ajụjụ na Chineke enweghị ike ibuli, naEbe a Na ajụjụ nke ihe ọjọọ eke (leekwa akwụkwọ nke abụọ na trilogy m na isi nke iri).
 Nkwubi okwu bu na ihe oma ya (osi nkpu) di iche na nke anyi. O nweghị iwu ndị na-adịgide adịgide ọ na-erube isi, ma ọ bụ ya na-enye ha iwu. A na-ejide onye ahụ site n'usoro categorical nke enyere ya ikike, ya mere a ga-eme mkpebi iji mee ihe kwekọrọ na ya. N'aka nke ọzọ, Chineke etinyeghị aka, kama ọ na-ahọrọ inye ya nkwado. Ramchal ga-ekwu na ọdịdị ya bụ ime ihe ọma.
 Na mmalite nke kọlụm 278 Atụlela m echiche nke nehma dhakisufa, ọ dịkwa m ka mkparịta ụka ebe ahụ zakwara ajụjụ a.
 Hụ akụkọ gbasara usoro categorical na halakhah, nke na-egosi n'ihu n'ihe ntụnyere dị n'etiti halakhah na omume, mana oge a ọ gbasara ọdịnaya ọ bụghị usoro ezi uche dị na ya. N'ebe ahụ, m na-arụ ụka na categorical usoro nwere ọnọdụ halakhic.
 M ga-ewelite ebe a echiche mbụ nke ka na-achọ incandescence. Echere m na e nwere ihe dị iche mgbe niile. N'ihe gbasara omume, enwere ntinye aka na ụkpụrụ omume, mana na halakhah enwere ma ntinye aka na ụkpụrụ okpukpe yana ọrụ irube isi n'iwu site n'ịbụ usoro iwu Chineke (n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ na-akwalite ụkpụrụ okpukpe. ). Echiche ebe a bụ na n'omume ọ nweghị iwu Chineke kama ọ bụ naanị uche Chineke ka anyị mee otu a. Usoro categorical enweghị ọnọdụ nke mitzvah n'ime usoro nke halakhah (n'agbanyeghị na m na-ekwu na ọ nwere ọnọdụ halakhic. Lee akụkọ m. Ebe a).
Ma ọ bụ na mgbe m na-ebughị ọnụ na Yom Kippur n'ihi na m na-arịa ọrịa, akụkụ nke iwu adịghị adị n'ezie, ebe ọ bụ na iwu n'ọnọdụ dị otú ahụ bụ iri nri na ịghara ibu ọnụ. Ya mere, site na iri nri a ọ dịghị ihe ọjọọ mere na ọ dịghị ihe ga-akwa ụta. N'aka nke ọzọ, n'ọnọdụ omume, ọ bụrụgodị na a jụrụ ụfọdụ uru n'ụzọ ziri ezi, ọrụ omume nke ịnọgide na-abụ otu (ma e wezụga na ọ pụghị irube isi. N'ezie, m na-arụ ụka na n'ọgba aghara omume, a na-ajụkarị ya mgbe niile. ' na anabataghị'). Ma na halakhah nwekwara akụkụ dị mkpa (ndozi nke e kere site na mitzvah na mmebi site na mmejọ), na gbasara nke a, ọ dị ka ọ dị ka ihe anyị hụrụ n'ọnọdụ omume. Ọ nwere ihe jikọrọ ya na ọdịiche dị n'etiti ịdị adị nke de dicto na ịdị adị nke de re, na ihe ndị ọzọ.
 Lee ndetu na bAkụkọ Na ntaram ahụhụ nke Halacha n'Isi nke D, ebe m pụta megide mechanistic ịbịaru nso na ntaramahụhụ nke eluigwe.
Azịza nye arịrịọ "Onye kere Onye Okike".
Echiche 80 na “Lee anya na nsogbu Othipron n'ìhè nke arụmụka (Ogidi 457)”
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 na 04:XNUMX
Otu midwife na-akwa ụta na e gbochiri ya ibu ọnụ na Yom Kippur. N'ihe gbasara iwu ahụ, a na-ekpuchi ya kpamkpam - ọ bụ ihe efu. N'aka nke ọzọ, iwu ahụ ka a na-elekọta mkpụrụ obi na mkpụrụ obi gafere karịa. Ma ọ dị mwute, n’agbanyeghị na ọ maara nke ọma na nri ya ugbu a bụ iri nri, n’ihi na o bughị ọnụ. O nwere ụbọchị nke ibu ọnụ, ịdị ọcha na mkpuchi mmehie. Ị ga-ewepụ mmetụta ndị a dị ka Afra Daraa, ma wepụ ya na nkwupụta nke 'psychology' - arụmụka ị na-echeghị? Ma ọ bụ ọ dị ihe ọzọ ebe a nke yiri iru újú nke enweghị omume omume?
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 na 01:XNUMX
M n'ụzọ zuru ezu na-aghọta nke a iru újú, na m na-eche na ọ n'ezie nwere ebe. Ihe m tụlere bụ ajụjụ ma enwere mmasị / ọrụ (ọ bụghị halakhic) ịkwa ụta. Na nkenke, m na-eme ihe na normative karịa nke uche larịị. Ọ bụrụ na ndị mmadụ furu n'egwuregwu bọọlụ, ọ dị nwute, yabụ na ị gaghị abụ onye ụkọchukwu dịka onye na-elekọta ụlọ ?!
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 na 18:XNUMX
Ajụghị m ma ị ghọtara iru újú, ọ gwụla ma ị na-ahụ na ya uru dị nso ma ọ bụ yiri mfu nke ụkpụrụ omume. A gaghị echefu echefu egwuregwu bọọlụ.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 na 49:XNUMX
Ọ bụghị otu ahụ, ma ọ bụrụ na ọ bụla. Dị ka ihe m dere na kọlụm, na-eche na Gd na-egbochi mmebi ime mmụọ ma ọ bụrụ na mmadụ mee ihe n'ụzọ ziri ezi, mgbe ahụ ọ dịghị ihe mere. Ma ọ bụrụ na ọ na-akwa ụta maka ọnwụ ya (ọnwụ nke ahụmahụ) - nke a bụ n'ezie ikike ya ma ọ bụchaghị uru. Ma eleghị anya, ọ na-egosipụta ụdị Yarosh ebe ọ bụ na mwute na-egosi na ihe dị ya mkpa. Ma iru újú nke omume bụ ihe karịrị nkwupụta nke uru dị ya mkpa. Nkwu na ihe nwere nsogbu mere ebe a, belụsọ na enweghị m ikpe mara. N'okwu halakhic ọ nweghị nsogbu mere. Kachasị ukwuu, ị tụfuru ahụmịhe.
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 na 13:XNUMX
Echere m na ọ dịghị ihe àmà sitere n'eziokwu ahụ bụ na e nwere ajụjụ omume banyere Chineke na a na-amanye omume ọma n'ahụ ya.
Ajụjụ ndị a na-eche naanị na Chineke họọrọ iwu nke omume dịka ụkpụrụ kachasị elu, ya mere jụọ otu ọ ga-esi emegide onwe ya.
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 na 18:XNUMX
Sharpener - ajụjụ a na-akọwapụta na ọ bụghị esemokwu. Ya bụ, o doro ya anya na e nwere ezi omume maka nke a, ebe ọ bụ na ọ na-eche na omume bụ ụkpụrụ kachasị elu nke afọ ahọrọla.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 na 03:XNUMX
Echeghị m na ọ gbakọrọ. E wezụga nke ahụ, ọ bụrụ na ọ dị mma, mgbe ahụ mkpali adịghị mkpa. Ma echere m na ị na-efunahụ abụ abụ nke ajụjụ ndị a: ị na-enye ha dị ka ajụjụ ezi uche dị na ya (banyere njikọ ya), mana ajụjụ ndị a bụ ụkpụrụ. Ọ dị ka a ga-asị na Abraham onye nyere iwu irubere nwa ya isi ga-eche naanị maka nguzosi ike nke Gd onye kwere nkwa na Aịsak ga-akpọ ya mkpụrụ, ma leghara ajụjụ ahụ nke otu Gd ga-esi nye iwu dị otu a. Gị abụọ ndị a bụ ajụjụ ezi uche dị na ya. Nke ahụ abụghị ihe ndị na-ede uri pụtara.
L. Adar A. 03 - 03/2022/15 na 35:XNUMX
Banyere ajụjụ Tirgitz - nke a bụ ajụjụ dị mma n'ezie, n'ihi na mmetụta ahụ bụ na Halacha dị iche na ọrụ omume (dị ka Maimonides kewara n'etiti iwu uche na nke anụ ahụ, wdg). Otu ụzọ isi kọwaa nke a bụ na Gd nọ n'okpuru usoro mmụọ dum nke anyị na-enwetaghị - mgbe ahụ ka a ga-ajụkwa ajụjụ a - ọ bụrụ na Gd nọ n'okpuru ụdị iwu a gbajiri agbaji, yabụ na-egosi na usoro iwu a. bụ onye dị elu, ụdị Spinoza Chineke Ọ bụghị onye onwe ya na enweghị mmasị, kama na ụwa "eke" na-abụghị nke anụ ahụ. Ọ dị m ka ajụjụ nke idobe Chineke n'okpuru iwu adịghị ike na-adịghị adị n'ihe gbasara iwu ezi uche dị ka ị kọwara (na ha abụghị "iwu"), ọ dịkwa ntakịrị ike n'ihe gbasara iwu omume. , n'ihi na ị rụrụ ụka - ntakịrị warara ma a na-ekwu na m nwere ike ịnakwere - na ha dị mkpa n'otu ụzọ ahụ. Mana a bịa na iwu halakhic ọ na-esikwu ike ịnakwere, n'uche nke m. N'ihi na mkpa ha na-agụnye ịmepụta ụwa ebe ha dị mkpa, dị ka ọ dị, na n'ihu ya dị ka ọ dịghị mkpa (arụmụka ahụ bụ na ha dị mkpa na ọkwa kachasị elu, ma ka na-agaghị ekwe omume ịghọta ha - nke bụ nnukwu ngwa ngwa. ma ọ bụrụ na e kere ụwa ọnụ na iwu ndị a siri ike ịkwụsị). Nke a bụkwa eziokwu banyere iwu nke omume ("" N'ihi na ihe mgbu dị njọ "bụ nkwupụta nke dị naanị n'ụwa ebe ihe mgbu dị - na nnukwu ajụjụ bụ ihe mere Chineke ji kee ihe mgbu n'ụwa ma ọ bụghị ihe mere o ji kwuo ya. ekwesịghị ime ihe mgbu), ma n'ụzọ ụfọdụ o yiri ike na ụwa m wee ebe iwu yiri ihe aka ike. Otú o sina dị, ọ na-etinye Chineke n’ụwa nke bu ya ụzọ na nke ọ na-apụghị ịchịkwa. Site n'ụzọ, e nwere ihe ọzọ chepụtara ekwe omume obibi ajụjụ a, nke m na-amaghị ihe m na-eche banyere - na-ekwu na Gd nwere ike họrọ ụwa ebe naanị iwu nke omume dị mkpa dị ka mmadụ ọrụ, na o nwere ike họrọ. ụwa ebe a na-ajụ iwu ndị a n'onwe ha megide ụkpụrụ ndị ọzọ.Ha nwere ike ịbụ ihe ọ bụla ma dabere na nhọrọ ya. Ma ọ họọrọ nhọrọ nke abụọ n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọnọdụ dị otú ahụ adịghị, anyị agaghị ele iwu ndị a anya, ha na-egosipụta onwe ha (dị ka Maimonides na-ede banyere osisi nke ihe ọmụma na doc). Dị ka nke a ga-ekwe omume - ịdị adị nke ụwa halakhic nke na-emegide iwu nke omume bụ mgbe ụfọdụ ziri ezi n'ihi ihe ụfọdụ mpụga, ọ dịghị mkpa, na ọ dịghị mkpa a dum ụwa nke iwu nke Chineke nọ n'okpuru ya. N'aka nke ọzọ, dị ka e kwuru, kpọmkwem mkpebi imepụta ụwa dị otú ahụ pụrụ iyi ihe a na-enyo enyo.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/17 na 07:XNUMX
Aghọtaghị m ihe a na-ekwu. M ga-ekwu naanị isi ihe abụọ na nkwupụta gị (nke m nwere olileanya na m ghọtara):
1. Iwu anaghị etinye aka. Nkọwa nke ezi ihe na ihe ọjọọ abụghị ebe ahụ mana ikekwe ọ bụ eziokwu. Ya mere ọ dịghị ihe na-ekwu banyere ajụjụ ma ha dị elu karịa Chineke ma ọ bụ na ha.
2. Iwu gbasara omume bụkwa iwu naanị n'ụwa anyị. Ọ bụrụ na e kere ụwa ọzọ nke dị nnọọ iche na ihe ndị e wuru kpamkpam dị iche iche (ha enweghị mwute na nhụjuanya), mgbe ahụ iwu ndị ọzọ gaara etinye aka na ya. Mana ọ bụrụ na ha bụ iwu gbasara omume mgbe ahụ ndị a bụ itinye iwu omume nke anyị n'ọnọdụ ndị ahụ. Nke a bụ kpọmkwem ihe ị kọwara gbasara halakhah, yabụ na ọ nweghị ihe dị iche.
Ụmụ ya nwoke bụ Yitzhak Koren
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/20 na 32:XNUMX
"Nkwupụta njirimara ọ bụla nke ụdị: a bụ b. N'iche na nkwuputa a ziri ezi, mgbe ahụ ọ pụtara n'ezie: a bụ a, nke pụtara ihe efu tautology." - Ọ na-esiri m ike ịchọta nsogbu ebe a. N'iche na nzọrọ a ziri ezi, ọ bụ n'ụzọ ezi uche dị na ya ịza A = A, kamakwa ikwu 1 + 1 = 2 yana nzọrọ ọ bụla ziri ezi. Ọ bụrụ na ihe nkebi ahịrịokwu pụtara bụ ozi ọ na-agbakwụnye, mgbe ahụ ọ dịghị ahịrịokwu nwere "pụtara na-eche na ọ bụ eziokwu." Ọ bụrụ na anyị na-eche / mara na ọ bụ eziokwu, mgbe ahụ ikwu ọzọ na ọ bụ eziokwu adịghị tinye ozi na anyị, ya mere ọ bụghị ịrịba.
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/20 na 44:XNUMX
Na okwu ndị ọzọ: o nwere ihe ọ pụtara na ọ bụghị izi ihe.
Omume nna gi
A. Bader B. H. 03 - 03/2022/23 na 10:XNUMX
Ihe ịma aka Uthron mara mma bụ maka arụsị, ndị na-edochaghị anya ruo n'ókè e ji mara ha na omume. Kama, dị ka akụkọ ifo si dị, o doro anya na ha jupụtara n'ekworo na ike.
N’ụzọ dị iche, Chineke Izrel bụ isi iyi nke eziokwu na isi iyi ihe ọma. Ọ bụghị 'n'okpuru' omume na eziokwu. Ọ bụ eziokwu na omume na ha zuru okè ọcha. Anyị dị ka ndị okike na ihe ọmụma anyị bụ obere crumb. Anyị maara ntakịrị site n'uche anyị, uche anyị na ọmụmụ ihe anyị, ma ihe anyị maara bụ ntakịrị irighiri site na nkọwa zuru ezu, nke naanị Onye Okike nke ụwa maara n'ozuzu ya na ọ bụ naanị ya maara nzube ya.
Ihe isi ike nke omume anyị banyere ụzọ Onye Okike dị ka ihe isi ike nke nwatakịrị na-aghọtaghị ihe mere nna ya ji tie aka mgbe ọ gbalịrị ịrapara hama n'ime oghere eletrik, ma ọ ghọtaghị ihe mere e ji nyefee nna ya n'aka. Ìgwè okwute obi ọjọọ nke na-acha ọcha na-akpụpụta mma ha na-adọkasị anụ ahụ nwata ahụ.
N’ihe banyere ndị nne na nna bụ́ mmadụ, anyị enweworị ihe ùgwù ịghọta na ihe a na-eti n’aka na-abịa n’ịzọpụta nwa ahụ n’ọkụ eletrik, ‘ndị na-adọkpụ mma n’uwe ọcha’ na-awakwa nwa ahụ ahụ́ na-azọpụta ndụ. Otú ahụ ka omume nke Onye Okike nke ụwa, bụ onye mere ihe a kpọrọ mmadụ ọtụtụ narị afọ nke nnyocha iji ghọta ntakịrị nke omimi ha - na anyị na-ekwe ka anyị na-enye ụfọdụ 'otuto' nye Onye Okike anyị, na nhụjuanya na mmekpa ahụ ọ. na-eweta kwa ayi di nma, Idozi ayi na corridor.'Lounge' ka ayi we were obi-ayi mara' na mb͕e nna nēme nwa-ya nwoke ahuhu, 'Elkich nākpa gi aru.'
Daalụ, Othipron Nefshatim Halevi
'Ụkpụrụ omume nna gị' na 'ozizi nne gị' - ịnakwere yoke ma ọ bụ nghọta na njirimara?
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/02 na 05:XNUMX
Ọ bụrụ na Onye Okike nwere njirimara zuru ezu n’etiti uche ya na ihe bụ́ ezi ihe, mmadụ pụrụ inwe ọdịiche dị n’etiti echiche ya nke ihe ọma na ihe ziri ezi na ntụziaka ndị ọ na-anata n’aka Onye Okike ya. Na ọdịiche a abụghị naanị 'ekwe omume' ma ọ dị mkpa, mana ọ na-ebelata ma ọ bụrụhaala na onye ahụ na-emewanyewanye ma ghọtakwuo ọchịchọ nke Kono.
N’agbanyeghị nke ahụ, mmadụ pụrụ inwe afọ ojuju ịnara yok n’ihi na o ji n’aka na Onye Okike nke ụwa na-eme ihe n’ikpe ọ bụrụgodị na mmadụ aghọtaghị, ma nke ahụ ezughị. N'ihi na onye ahụ kwesịrị ịbụ nanị 'ohu' na-eguzosi ike n'ihe nye Kono, kamakwa 'nwa akwụkwọ' nke maara otú e si aghọta uche Kono ọbụna n'ọnọdụ ndị ọ na-enwetaghị ntụziaka doro anya.
Maka 'ohu' na-ezuru ime ka 'ime ya' ma ọ bụ 'mee otú ahụ'. Ọ gaghị ewere nzọụkwụ na-anataghị ntụziaka doro anya, ma ka ọ bụrụ 'nwa akwụkwọ' maara otú e si eduzi uche nke rabaị ya ọbụna mgbe ọ dị mkpa 'ịghọta ihe site n'ihe', a ghaghị inwe nghọta nke ndị rabaị ya. ihe ọ pụtara, bụ́ nke o nwere ike iji ụkpụrụ mee ihe.
Iji mezuo nke a, e nyere Torah nke edere nke e si n'elu kwuo okwu ahụ bụ 'nke a kanyere na mbadamba nkume', ma ga-abụkwa 'Torah ọnụ' nke na-achọ ịghọta ihe iwu Torah pụtara na mgbagha, na site n'ịghọta omimi nke iwu Torah. Iwu Torah - mmadụ nwere ike banye mmụọ nke ihe.
Site na ọnụ Torah nke na-akọwa iwu nke nnwere onwe - mmadụ na-anapụta onwe ya pụọ ​​​​na 'nhụjuanya nke' Yifron ', ebe ọ bụ na uche nke Onye Okike malitere dị ka' ịnakwere yoke mpụga' - na-aghọwanye 'Torah Delia' na. nke ọ na-aghọta ma na-amata.
N'ezi obi, Enoch Hanach Feinschmeker-Felti
Ezi na ihe ọjọọ
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/03 na 12:XNUMX
"Ma mgbe a na-ata mmehie [mmadụ n'ime osisi nke ihe ọmụma] ahụhụ site n'ịbụ ndị a napụrụ otu ikike ọgụgụ isi ... ya mere a na-ekwu 'na ị dị ka Chineke na-ama ezi ihe na ihe ọjọọ' ma ghara ịsị 'ndị maara ụgha na eziokwu' ma ọ bụ 'ndị rụzuru ụgha na eziokwu'.
Na ihe ndị dị mkpa ọ dịghị ihe ọma na ihe ọjọọ ma ọlị ma ụgha na eziokwu ”(Mon., Part I, P.B.)
Ma eleghị anya, Maimonides ebe a na-ekwukwa maka eziokwu gbasara ụkpụrụ ma mebie nsogbu Eitipron?
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/10 na 30:XNUMX
Lee kọlụm 177 ebe m kọwara na nke a bụ nkwanye ùgwù na ọ bụghị omume.
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/12 na 59:XNUMX
Daalụ maka ntụaka ahụ, agụpụtara m, enwere m ike aghọtaghị m, mana ahụghị m nsogbu n'okwu Maimonides.
Ọ dị m ka a ga-ekewa ahịrịokwu ahụ ụzọ abụọ:
"Ma ị dị ka Chineke nke maara ezi ihe na ihe ọjọọ" - nke a bụ maka mmata nke tolitere n'ime gị maka ndị a ma ama, ndị mara mma na ndị rụrụ arụ, ma ọ dị mma ma ọ bụ njọ. Ya mere, ugbu a, omume yiri gị ihe ọma na ihe ọjọọ.
"[amaokwu ahụ] ekwughịkwa ụgha na eziokwu ma ọ bụ ndị na-enweta ụgha na eziokwu, na n'ihe ndị dị mkpa ọ dịghị ihe ọma na ihe ọjọọ ọ bụla ma ọ bụghị ụgha na eziokwu" - ebe a Maimonides pụtara omume. Ya bụ, n'echiche a, i chigharịwo n'ebe Chineke nọ wee tụfuo ikike ọgụgụ isi nke ị na-enwebu ịghọta ụkpụrụ omume n'ụdị eziokwu-Chineke bụ eziokwu na ụgha.
Ekwesịrị ịgụ ya dị ka ajụjụ na azịza - gịnị kpatara na amaokwu ahụ ekwughị "ụgha na eziokwu"? Azịza - n'ihi na ị tụfuru ya. Ma ị ga-amarakwa na n'ezie, n'ebe Chineke nọ, ihe ndị dị mkpa (omume) adịghị mma na ihe ọjọọ kama ụgha na eziokwu. Na ebe a nsogbu nke Eitipron bụ nke ukwuu.
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/13 na 52:XNUMX
Adịghịzi m echeta kpọmkwem otú e si dee ha, ma achọpụtara m na ọ bụ nanị ịkwanyere mmadụ ùgwù, ọ bụghịkwa omume ọma. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụgodị na ị ziri ezi na e nwere nkwupụta ụfọdụ na Maimonides nke na-adịghị ewepụ nsogbu nke Eitipron. Nke kachasị, ị nwere ike ịrụ ụka na Maimonides nwere ọnọdụ nke ya na nsogbu ahụ.
Omume ọma-ọmịiko ka ọ bụ omume-nkwụsị?
24 Adar 03 2022 - 00/50/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Na SD ACH Tov na Adash XNUMX
Ihe dị iche abụghị n'etiti 'okpukpe' na 'omume' kama n'etiti 'omume ọmịiko' na 'omume nke igbochi'. N'aka nke ọzọ, Detersh nwere ụkpụrụ nke igbochi iji weta onye mmehie mmegwara obi ọjọọ nke ga-ewepụ onye mmehie n'ọdịnihu 'oh amen' nke nlọghachi nke mpụ ahụ.
N'ebe a, anyị chọrọ 'usoro nke Chineke' nke ga-enye usoro ziri ezi nke ga-eweta nguzozi n'etiti mkpa maka ihe mgbochi dị ịrịba ama na ọchịchọ Chineke imere ebere ma kwe ka mgbazi.
Ya mere, dịka ọmụmaatụ, nkwụsị na-achọ ikpochapụ site na mgbọrọgwụ ndị mmadụ mepụtara echiche nke ịkpọasị na ihe ọjọọ - Amalek na ndị Kenan - na n'aka nke ọzọ ọmịiko na-achọ ịkpọ ha ụzọ n'udo na ikwe ka ha gbapụ site 'ịgbanwe ntụzịaka'. site n'ịnakwere ụkpụrụ bụ isi nke okwukwe na omume.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/01 na 49:XNUMX
Mabụl gburugburu triangle ewelitere. Ọ bụ ihe na-edobe ihe niile dị na triangle yana ihe niile dị na gburugburu.
Ihe bụ triangle gburugburu bụ ma okirikiri ma mee nke ahịrị atọ kwụ ọtọ.
Ọ bụ ezie na nke a na-emegide mgbagha kwa ụbọchị, ọ dabara nke ọma, eziokwu adịghị agba egwu na ụda nke mgbagha anyị. Ma ọ bụghị ya, anyị agaghị adị.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/14 na 20:XNUMX
Echeghị m na foto ahụ ị kọwara na-egosi na a na-amanye Chineke ụkpụrụ okpukpe. Site n'ịbụ onye ọ bụ, ya onwe ya bụ ikike nke nwere ike ikpebi na ụfọdụ ụkpụrụ okpukpe (nke o kere) dị mkpa iji jụ ụkpụrụ omume. Eziokwu ahụ bụ́ na ụkpụrụ omume na-ejikọta ọnụ apụtaghị na ha bụ ndị mbụ na ndepụta nke ihe ndị ka mkpa.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/14 na 23:XNUMX
Ọ dị m ka ị ghọtaghị arụmụka m (ma ọ bụ Tirgitz). N’ịbụ ndị na-eche na ụkpụrụ okpukpe dị n’aka ya nke pụtara na ọ pụrụ ikpebi ha otú masịrị ya, ọ dịghị ihe mere n’ụwa ji ekpebi ụkpụrụ okpukpe nke megidere omume. Gịnị mere o ji mee nke a ma ọ bụrụ na ọ pụrụ ikpebi uru okpukpe bara n’ụzọ dabara n’omume? Ọ na-esote na ụkpụrụ okpukpe adịghịkwa n'aka ya.
A. Bader B. H. 04 - 03/2022/15 na 55:XNUMX
Ọ bụrụ otú ahụ, aghọtaghị m na mbụ, ma ọbụna nke ahụ anaghị abata n'uche m, n'ihi ihe abụọ:
1. O nwere ike ọ gaghị ekwe omume ịmepụta usoro okpukpe nke dabara na omume ọma (dị ka okwu gị banyere ịmepụta ụwa nke na-enweghị ihe ọjọọ). Nke a apụtaghị na a na-amanye ya, ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịhapụ ya kpamkpam, n'ụzọ dị iche na ọnọdụ na omume. Ma n'iche na ọ chọrọ otu n'ihi ihe ụfọdụ, ọ ghaghị imegide ụkpụrụ omume ụfọdụ. O yikarịrị ka ọ họọrọ nke kacha bụrụ eziokwu, nke a na-akọwakwa njikọ dị n'etiti ụkpụrụ Torah na ụkpụrụ omume.
2. Chineke nwere ike kwụọ ụgwọ, n'ụwa a ma ọ bụ na-esote, onye ọ bụla nke omume rụrụ arụ n'ihi ịdị adị nke Torah uru. O nwere ike ijide n'aka na na nchịkọta mkpokọta ogo obi ụtọ ya ga-adị ka ọ kwesịrị ịdị na-enweghị uru Torah.
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/19 na 36:XNUMX
1. Ya mere nke ahụ pụtara na a na-amanye ya. Ọ bụrụ na ọ na-edozi usoro ahụ dị ka masịrị ya, ọ dịghị ihe mgbochi ọ bụla, gịnị na-egbochi ịkwado omume?
2. Na ọ nwere ike kwụọ ụgwọ maka mgbanwe nwere ike ịbụ eziokwu. Ma ọ dịghị ihe mere a ga-eji mee otú ahụ n’ụwa. O nwere ike ịtọ ụkpụrụ ndị a dabara n'omume.
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/19 na 52:XNUMX
1. Ọ na-esetịpụ usoro dị ka ọ masịrị ya, ma nke a apụtaghị na e nwere na ohere nke usoro nke okpukpe ụkpụrụ na 0 mebiri nke omume. Ọ pụghị guzobe usoro okpukpe ọ bụla, ma ọ bụ họrọ ndị na-emerụ omume kacha nta.
Dị ka ọ nwere ike ịhọrọ ịghara ịmepụta ụwa, ma (ikekwe) enweghị ike ịmepụta ụwa nwere uru niile nke ụwa a ma na 0 ọjọọ. Nke a apụtaghị na okike nke ụwa na-amanye ya, ma na ọ bụrụ na ọ chọrọ (!) Iji mepụta ụwa nke nwere nnwere onwe nhọrọ mgbe ahụ, a ga-enwekwa ihe ọjọọ n'ime ya.
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/20 na 32:XNUMX
Aghọtaghị isi ọnwụ a.
Ọ bụrụ na enweghị mmachi na-adabereghị na ya, gịnị na-egbochi ya ka ọ ghara ikpebi na nwunye Cohen nke e dinara n'ike kwesịrị ikewapụ ya na di ya? O nwere ike ikpebi ihe dị iche (nye anyị Torah na-enweghị nkọwa a). Olee ihe mgbochi na-egbochi ya ime otú ahụ? N'ihe gbasara ihe ọjọọ, a kọwara m na iwu ndị siri ike nke okike nwere ike ọ gaghị adị na-enweghị isi nke nhụjuanya na ihe ọjọọ. Enweghị usoro ọzọ. Ma usoro nke iwu okpukpe enweghị ihe mgbochi na ha. Ha na-aka ike. Yabụ kedu ihe gbasara okpukperechi na-egbochi ya ikpebi naanị iwu iri na anọ na-enweghị nwunye Cohen?
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/20 na 34:XNUMX
Rabbi Narali, ị ga-ede kọlụm (ma ọ bụ ị dere na amaghị m ya)
Banyere akụkụ nke halakhah nke a na-ejikọta ya na eziokwu yana ekwe na jụrụ, wdg.
C. Bader B. H. 05 - 03/2022/20 na 45:XNUMX
Aghọtaghị m arịrịọ ahụ
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/15 na 24:XNUMX
[I mere ihe na-abụghị onye mmeri dị ka onye mmeri. Ọ dị m ka ihe na-edoghị anya (ọ pụtakwara n'okwu gị nye m) ọ bụghị n'ụzọ siri ike i kọwapụtara ya.
Foto a na-egosi na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti halakhah na omume mgbe ọ na-abịa n'esemokwu, ma ka emechara, mmadụ nile na-aghọta ihe dị iche a na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na-ewere echiche ha na ọkara. Ọbụna ma ọ bụrụ na mmadụ na-akwa ụta maka ọnwụ nke onye na-enwetaghị mitzvah ma ọ bụ mmetụta pụrụ iche nke na-esonyere ịdị adị ya, anụtụbeghị m onye na-akwa ụta na ọ ga-esi na lau n'ihi ịjụ (ọjụjụ dị ukwuu dị ka shatanz na tassel ma ọ bụ yibum). , N'ihe banyere Madin, e nwere nnukwu ọjụjụ, na nke a bụ ostensibly Tza'a), na n'omume, ndị nkịtị na-akwa ụta na ha mebiri iwu omume, dị ka ịzenarị a kosher gentile na Shabbat.
Ya mere, ị kọwara ya na tiori na na halakhah Chineke na-edozi mmebi ime mmụọ na n'omume adịghị arụzi mmebi anụ ahụ. Ma olee otú ọ na-aza, mgbe ahụ, ọ bụrụ na e nweghị omume dị mkpa mgbe ahụ gịnị ka ndị mmadụ na-eche banyere mmerụ anụ ahụ? Ha (na m n'ozuzu) ha bụ ihe na-ezighi ezi ma ọ nweghị esemokwu normative ebe a kama ọ bụ naanị mmetụta nke amaghị ihe?
Ịkọwa mmadụ kwesịrị ịtinye n'ụzọ doro anya na ruo mgbe ebighi ebi ruo mgbe iwu-nsọ ga-adị na ọbụlagodi mgbe a jụrụ ya, otu iwu ọ bụla ga-anọrịrị. Nke ahụ bụ na iwu ahụ abụghị ntụziaka bara uru "Ugbu a mee otú ahụ" kama ntụziaka nke ụkpụrụ, na kama esemokwu enwere iwu n'ezie ebe a na iwu ebe a ya mere kwa kama esemokwu na mkpebi doro anya enwere nsogbu. . (Ewezuga na o doro anya na ọ dịghị mkpa ịbịarute eziokwu ime mmụọ ọ bụla).
Na nke a bụ isi ihe Raqa (n'ezie a na-achọta ya edere na mkpa na mmeghari ohuru na mkpọsa maka ememe dị ka ị na-ezo aka na m. Agụghị m mkpọsa ahụ ma naanị hụ na ọ na-ekwu na ọ bụrụ na mmadụ na-afụ shofar na Rosh Hashanah nke dara ada. na Shabbat N'ezie ma ụkpụrụ. Aghọtaghị m ihe a n'ezie, ị nwere ike ịkọwara m ya? (Na azịza ebe ahụ ị dere na ị na-eche n'ezie). Iwu a bụ ntụzịaka bara uru, ahụghị m ihe ọ bụla ọ pụtara n’ikwu na n’otu aka m na-enye A iwu na n’aka nke ọzọ a na m enye iwu B na n’ezie m na-enye B.
C. Bader B. H. 06 - 03/2022/16 na 04:XNUMX
Aghọtaghị ihe kpatara na ị naghị ahụ mwute maka mfu nke mitzvah. N'ezie ọ bụ ya. Dị ka onye na-abụghị nne di n’ihi na ọ na-arịa ọrịa. Na akụkọ ndị a maara banyere ndị rabaị na-emesi ya obi ike ma na-agwa ya na ọ bụ ọrụ ya n'ọnọdụ ya. E wezụga nke ahụ, n'ime ime lao na-asọ oyi ọ bụ ọnọdụ nkịtị na ndị mmadụ amarala ya ahụ. Dịka ọmụmaatụ na tassel nke ajị anụ na linen, ọ dịghị onye na-echeta na e nwere shatnaz. Ma na onye ọrịa na USSR ọ bụ ọnọdụ na-adịghị ahụkebe na nwute.
N'ezie ndị mmadụ na-eche banyere mmerụ ahụ na iru újú nke ndị ọzọ. Kedu ihe ọ bụ na m mere nke ọma. Na ọ bụrụ na mmadụ na-ata ahụhụ n'ihi ọdachi ndị na-emere onwe ya, anaghị m akwa ụta. Ya mere, mgbe m mere mmehie na ya (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dị mma) m na-ejide n'aka na m na-ewute m. Chei ndị Hezi nọ n'ihe mberede na-agaghị ata ụta maka ya, na ọbụna mmebi ahụ n'onwe ya bụ ụta, ole iru újú ha nwere maka mmebi ha kpatara.
Anaghị m echetakwa okwu m ndị ị na-ekwu na iwu ahụ dị, mana edere m ya nke ukwuu n’ime akwụkwọ nke atọ na usoro mgbagha Talmudic. Ihe niile nke akwụkwọ a na-etinye aka na ọdịiche dị n'etiti iwu na nkuzi bara uru. Iwu bụ ụdị eziokwu, na ndụmọdụ bara uru bụ naanị ihe sitere na ya. Eziokwu halak nke ukwuu. Naanị chetara m nke ahụ.
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/18 na 01:XNUMX
"Nkwupụta" nke okwu gị dị na azịza dị na eri ebe ahụ mgbe m gbalịrị ikwubi site na RAA na iwu ahụ abụghị naanị okwu Chineke (ọ bụrụ na naanị okwu Chineke abụghị nke mitzvah na ọnọdụ ebe Chineke n'ikpeazụ n'ezie. na-enye iwu ka ọ ghara ime na ọbụna machibido ime) ị zara, sị, "Ekwenyere m na nyocha nke na-ahụ ihe ndabere na echiche nke mitzvos dị ka ụdị eziokwu ọ bụghị naanị ịdị adị nke okwu Chineke." Enwere m ike aghọtaghị ebumnuche gị ebe ahụ nke ọma, mana n'anya m okwu RAA ka na-aghọtachaghị. Ọ bụrụ na ị nyere m aka ịghọta echiche a, m ga-enwe ekele dị ukwuu.
N'ihe banyere iru újú, ọ dị m ka e nwere ọdịiche dị n'etiti mmejọ nke ndị mmadụ site n'omume (omenala na halakic sitere na akwụkwọ) na ezigbo ihe ndabere, n'ihi na ha na-ewute naanị maka ịghara ịzọ ụkwụ na ikiri ụkwụ ha ma ghara ịkwa ụta maka tassel. na adaka ọbụlagodi na echetara ha. Mana m na-ekwu okwu ahụ.
Na isi ihe - ọ bụrụ na omume na-ejikọta nanị n'ihi na ọ dị mkpa mgbe ahụ, ebe e nwere ihe mgbochi nke omume dị mkpa ọ dịghị shred nke normative nsogbu ọbụna imerụ otu puku mmebi. Gịnị bụ azịza eziokwu ahụ bụ na ndị mmadụ na-eche esemokwu ma na-atụgharịkwa ya n'ihu Chineke dị ka ị kọwara na kọlụm? Azịza gị bụ ka m ghọtara na ọ bụ mmejọ na n'ezie enweghị nsogbu ọ bụla na-emerụ ahụ mgbe Chineke wepụrụ iwu omume ya ka ọ ghara imerụ ahụ. Na ozizi nke imezi mmebi ime mmụọ megide ịghara imezi mmebi anụ ahụ bụ nanị iji kọwaa mmetụta ndị mmadụ ọ bụghị iji gosi na ha ziri ezi. ọ bụ ya n'ezie?
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/19 na 52:XNUMX
Enwere ike ịghọta nke a site na ntụnye m maka uru ime mmụọ. Ndị a pụtara ọbụna mgbe m na-enweghị ọrụ ime ihe na-eweta ha. Mana n'ezie uru naanị ezughị iji kọwaa mitzvah. N'ụzọ atụ a ga m asị na iwu ahụ dịkwa adị ruo mgbe ebighị ebi. Ma mgbe ụfọdụ, a ga-ebufe ya n'ihi iwu ọzọ.
Otu ihe atụ nke ihe o mere bụ na oge kpatara ụmụ nwanyị. Nkwenye nke fọrọ nke nta niile arbitrators na e nwere uru na-eme ya, na ọtụtụ n'ime ha ọbụna na-ewere ya dị ka existential mitzvah (Rabbi Brish pụtara na Safra dere na ọ jụrụ mba). Ma n'ihe gbasara iwu Chineke, a napụrụ ụmụ nwanyị. Ọ dịghị mkpa ime nke a, yabụ kedu ihe mitzvah dị ma ọ bụrụ na ha mere agbanyeghị?
Echere m na enwere nsogbu normative nke mmerụ ahụ na iru újú dị adị na ọ bụghị naanị nke uche. Mmebi nke omume n'adịghị ka Chineke ime mmụọ adịghị ehichapụ ọ bụrụgodị na i mere ihe dị gị mkpa.
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/21 na 15:XNUMX
Ihe atụ na iwu ahụ dị adị ruo mgbe ebighị ebi mana a ga-agaferịrị na-egosi nsogbu ahụ. Nke a ga-ekwe omume mgbe isi iyi nke mbuso agha sitere na eziokwu ime mmụọ dị jụụ na akuku na o yighị ka ọ ga-ekwe omume mgbe mitzvah bụ onye nwere ọgụgụ isi nke ga-agwa m ihe ọ chọrọ ka m mee. N’ime otu a, ị na-atụnyere iwu nke ikike ka shofar dị na Gd na Shabbat, ebe Gd n’ezie machibido m ịtụ egwu (nyere m iwu ka m rubere ndị amamihe isi. Ekwenyere m na ọ siri ike ịkọwa nkewa, ma ọ bụghị ya, ọ dị ka ọ dị. Ikwu na m na-eme ihe Chineke nyere n’iwu mgbe m na-enupụrụ ya isi ma na-afụ opi n’agbanyeghị anya ya dị ebube n’agbanyeghị mmachibido iwu ahụ bụ ihe iju anya. MM ọ bụrụ otú ahụ ọ ga-atụgharị uche na ya (site n'ụzọ ọ na-adọrọ mmasị iji tụnyere mitzvah na-esote na mmejọ na mkparịta ụka ị wetara na R. Asher Weiss, m ga-atụgharịkwa uche na nke a. A na-elodakwa ụtọ anụ ezi n'ime ya. n'ụzọ na-amachibidoro Dauriyta ikekwe Raqa kwetara na ọ dịghị iwu iri)
Aghọtaghị m ihe nsogbu normative kwesịrị imerụ ma ọ bụrụ na n'okwu a ọ nweghị iwu sitere n'aka Chineke nke na-amachibido imerụ ihe ọjọọ a kpọmkwem. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị na-ekwu na ọbụna n'omume nke iwu ka ịghara imerụ ahụ ka dị adị mana a ga-agaferịrị ya. Ọ bụrụ na iwu ahụ bụ ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi nke maara ihe niile ma kpebie ihe ị ga-eme otu ahụ mgbe ahụ okwu a anaghị aghọta nke m dị ka n'elu. Dịka ekwuru m ga-atụgharị uche nke a, ikekwe enwere m ahụhụ site na nyocha square.
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/21 na 41:XNUMX
Banyere mmachibido iwu nke Dauriyta na mitzvah, ihe atụ ka mma nke àjà a na-achụ anụ (ma nri dị na mmachibido iwu dị ka nri na-anọgide na enweghị mitzvah ma ọ bụ ma e nwekwara mitzvah ma mebiekwa) bụ nsogbu nke nwa nwanyị ahụ. nye ụmụnna. Beit Hillel amachibidoro na nwa bastard. Ọ ga-ekwe omume na n'echiche ha, ọbụna ndị na-eru uju ọnọdụ nke nwa nwanyị na-emezu mitzvah nke iru újú?! (Ọ ga-ekwe omume kewaa n'etiti iwu n'ime mitzvah na n'etiti iwu na mitzvos dị iche iche. Ma ihe niile bụ na ọ dị m ka ọ bụ otu ihe ahụ)
D. Bader B. H. 06 - 03/2022/22 na 55:XNUMX
Enwere eziokwu ime mmụọ, dịka m dere na kọlụm. Mana ha enweghị nkwado ọ gwụla ma enwere otu na-akwado ha na/ma ọ bụ nye ha iwu.
Ọ dịghị ihe dị iche n'okwu anyị n'etiti mmachibido iwu na enweghị ọrụ. Gị onwe gị na-ekweta ya, emesịa mee ka ọ sie ike. O juru m anya!
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/01 na 01:XNUMX
Kedu ihe ị chere na-eche na mbụ, na okwu nke Raqa dịkwa na lau Dauriyta ọ bụla nke a na-ajụghị n'ihi omume ọ bụla ma ọ bụrụ na e nwere omume ahụ ma mebie lau meriri mitzvah wee pụọ n'ọrụ, ma ọ bụ okwu ya. naanị na mmachibido iwu Durban nke na-akagbu Dauriyta mitzvah?
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/07 na 14:XNUMX
Enweghị mkpa maka echiche na ọgụgụ isi mbụ. Ọ dị m ka enwere ihe akaebe nke a site na eziokwu na mitzvah na-esote na mmejọ ahụ mebiri emebi. Na ugbua nke mbụ siri ọnwụ na ọdịiche dị n'etiti iwu a ma mee ihe na-asọ oyi mba. N'ọnọdụ ọ bụla, n'ọtụtụ ọnọdụ, mgbe a na-ajụghị iwu maka ihe ụfọdụ (dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị n'otu oge), ọ bụ ọnọdụ nke Ụlọikpe Kasị Elu.
N'echiche gị, ọ dịghị mkpa maka amaokwu maka nke a, ebe ọ bụ na ọnọdụ ahụ n'onwe ya enweghị uru maka mitzvah dị otú ahụ. Ma Gemara na-amụta nke a site na "onye kpọrọ onye na-apụnara mmadụ asị na-arịgo." Ọzọkwa, dị ka Ths.
D. Bader B. H. 07 - 03/2022/10 na 29:XNUMX
Ekwuru m okwu n'elu na mitzvah na-esote na mmejọ mana naanị m chere na ihe atụ nke sukkah e zuru ezu ebe omume nke mitzvah na-adịghị njọ (na e nwere mkparịta ụka gị na okwu nke R. Asher Weiss na Ezal). Ugbu a, ahụrụ m na Wikipedia ihe atụ nke iri matzah etinyere na Pesach ma ha na-ekwu ebe ahụ (anaghị m elele isi iyi) na ha anaghị apụ n'ụzọ ha ime matzah ma ghara ịhụ matzah matzah. Ma nke a na-egosi n'ezie dịka ị na-ekwu (ikekwe ma ọ bụrụ na ọ dị ebe ahụ mgbe ọ na-enweghị matzah ọzọ ya mere o doro anya na Gd machibido ya iri matzah nke baptizim).
E wezụga amaokwu, anyị agaghị ama ihe na-amụbawanye, ya bụ, ihe Chineke nyere n'iwu n'ezie, ikekwe n'ime matzah dipped o nyere iwu ee iri nri ma ọ bụrụ na ọ dịghị matzah ọzọ. Amaghị m okwu ahụ ma na-apụnara mmadụ ihe na onye a na-ekwu kwabatara Ihe ọhụrụ bụ ọbụna mgbe onye na-apụnara mmadụ ihe zụtara na onye njem ya maka ihe niile na-ahapụ ya ka ọ rie ya maka agụụ ka erughị eru nke ebe ịchụàjà. [E wezụga nke ahụ, echiche nke igosi na ma ọ bụghị "ọ dịghị mkpa maka amaokwu" bụ nnọọ dubious na karịsịa na ìhè nke kọlụm na a amaokwu nke na-akụziri ndị na-abụghị, n'ihi na anyị nwere echiche ebe a na n'ebe m n'ezie na-ekweta. na RAKA kwuru okwu ya na ị na-eche na okwu ya dị mma enwere m nsogbu na-eche na ị chọrọ amaokwu iji pụọ na nkọwa a]
N'ọnọdụ ọ bụla, ka e were ya na ị na-ekwu na onye ọ bụla na-eri nri a mịkọrọ adịghị edebe iwu matzah ma ọlị ma mebie iwu nke itinye mmiri. Ma onye ọ bula nke fọduru ufọdu n'ulo-ntu n'ubọchi-izu-ike nke Raaka nwere iwu ka ọ fùa, we gabiga nime Shabbat Durban.
Nke a pụtara na n'iwu nke ịjụ n'ime Torah, a na-akọwa mitzvah "onwe ya" naanị maka ọnọdụ ndị a na-ajụghị ya. Ma na iwu nke ịjụ Durban na mitzvah Dauriyta "na-anọgide" ma e wezụga na n'ezie a machibidoro iwu idobe ya na dị ka ihe atụ na iwu na-adị ruo mgbe ebighị ebi ma mgbe ụfọdụ ọ ga-agbaji.
10 Adar 03, 2022 - 14/56/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Banyere aro gị na iwu okpukpe, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ụkpụrụ ya dị n'okpuru, na-enweta site na eziokwu ndị nọọrọ onwe ha manyere Chineke - ọ dị m ka ọ na-adị m ka ọ na-eme ka ọ dị ọhụrụ ọzọ akụkụ nke na-ekekọta Chineke, ihe isi ike nke nkà mmụta okpukpe sitere na ya, enwere ike itinye nke a n'echiche nke. mkpa dị ukwuu maka ọzụzụ mmadụ. Iji mekwuo ọzụzụ na nhọrọ nke mmadụ, "Chineke nwere ọtụtụ Torah na mitzvos" maka ha, ọbụna ndị na-emegide omume ọma. M na-echeta na-ede na otu n'ime ogidi na ọ bụ kpọmkwem multiplicity nke ụkpụrụ na-enye ihe pụtara na nhọrọ, ebe ọ bụ na e nwere ndị ọzọ kwere omume nchikota n'etiti ụkpụrụ.
H. Bader B. H. 10 - 03/2022/16 na 30:XNUMX
Ihe m na-akpọ uru okpukpe ị na-akpọ ọzụzụ mmadụ. Yabụ kedu ka o si dị iche? Ị pụtara na-ekwu na ọ dịghị ihe mgbaru ọsọ ma ọlị na ihe ọzọ karịa mmecha nke nwoke? Ọ na-esote na iwu niile bụ nke aka ike (ọ nwere ike họrọ ndị ọzọ na ọbụna megidere iwu). Mana arụmụka Tirgitz laghachiri, gịnị kpatara enwere ikpe ndị o kpere megide omume.
H. Bader B. H. 10 - 03/2022/22 na 07:XNUMX
Ị na-ede na a na-amanye ụkpụrụ okpukpe na Gd, ma n'agbanyeghị na esemokwu dị n'etiti ụkpụrụ okpukpe, ọ na-eme ọrụ ebube ma na-egbochi mmebi okpukpe nke mere n'oge gara aga. Ọ bụrụ na aghọtaghị m otú okpukpe ụkpụrụ na-amanye ya - mgbe ahụ ọ nwere ike ịkagbu ha mgbe ọ bụla ọ chọrọ. Ọ bụrụkwa na ọ chọghị itinye aka n’ihe ndị e kere eke (ọbụna ọdịdị okpukpe), gịnị mere ọ na-eji etinye aka n’ihe banyere esemokwu n’etiti ụkpụrụ okpukpe?
H. Bader B. H. 11 - 03/2022/01 na 53:XNUMX
A naghị amanye ya ime otú ahụ. Manyere ya na nke a bụ uru. Ọbụlagodi na omume ọ naghị amanye ime ya mana naanị na nke a bụ nkọwa nke ọma.
19 Adar 03, 2022/22 - 04/XNUMX/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Banyere ihe i dere ebe a”
"Ọ bụ ezie na n'echiche ọzọ, enwere ike ịrụ ụka na na tiori ma ọ bụrụ na m mere ihe kwere, a na-ezere mmebi ime mmụọ. Enwere ike ịsị na Gd na-arụ ọrụ ebube ma na-egbochi mmebi ahụ ka onye ezi omume dị ka m nke na-ekwesị ntụkwasị obi n'iwu agaghị enwe mmekpa ahụ. ”
Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị mere na ọ gaghị arụ ọrụ ebube mgbe nile iji gbochie mmebi ime mmụọ ndị mmadụ na-eme, ma hà mere ihe e kwere ka ha mee ma ọ bụ na ha emeghị?
20 Adar 03, 2022 - 19/24/XNUMX na XNUMX:XNUMX
N'ihi na o nwere mmasị na ọdịnihu nke ụwa ga-adabere n'omume anyị. Ọ dị ka ịjụ ihe kpatara na-enye anyị nhọrọ ma ghara ime ka anyị na-eme ihe ọma mgbe niile na-enweghị nhọrọ (na n'ezie ọ bụghị ike anyị ma ọlị).
20 Adar 03, 2022 - 19/41/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ụwa ga-adabere n'omume anyị, nanị mmebi ime mmụọ adịghị adabere n'omume anyị, n'ihi na n'ebe ahụ dị ka ihe ị dere, ọ na-achọ itinye aka. Ma e wezụga nke ahụ, ọ bụrụ na Chineke chọkwara ka mmebi ime mmụọ dabere n’omume anyị, gịnịzi mere n’ihe banyere onye mere ihe e ji kwere ka o tinye aka iji gbochie mmebi ime mmụọ? E kwuwerị, ọ bụ uwe maka iwu ya na ụwa ga-adabere na omume anyị.
20 Adar 03, 2022 - 23/28/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ga-adabere na omume anyị pụtara na-adabere ma anyị emewo ihe kwere omume ma ọ bụ amachibidoro.
19 Adar 03, 2022/22 - 33/XNUMX/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Banyere ihe i dere na paragraf a:
M ga-akọwa ajụjụ ya. Dịka usoro m siri dị, Chineke nyere anyị iwu ka anyị nwee iwu megidere omume iji kwalite ụkpụrụ okpukpe. Ọ bụrụ otú ahụ, Tirgitz na-arụ ụka, o yiri ka a na-amanyekwa ụkpụrụ okpukpe na ya ma ọ bụghị n'ihi ọchịchọ aka ike ya (iwu ọchịchị ya). Ọ bụrụ na iwu ndị ahụ abụghị “eziokwu halak” nke etinyere n’elu Chineke kama ọ bụ iwu ya kere ya, yabụ na ọ gaara etinye ha n’ụzọ dị iche. N'ọnọdụ dị otú a, m ga-atụ anya na ọ bụrụ na ọ chọrọ (ma ketara) ime ihe ọma na ọ gaghị ewepụta iwu ndị megidere omume ọma. Ịdị adị nke esemokwu na-egosi na a na-amanyekwa iwu nke halakhah (ma ọ bụ ụkpụrụ okpukpe, nke otu iwu nke halakhah na-akwalite) na Chineke, ya mere a na-ejide ya (ma ọ bụ na-emegbu anyị) n'ihi mkpa ọ dị maka esemokwu ndị a."
Ọ pụtara site n'okwu gị na a na-amanye mitzvos na iwu niile nke Halacha na Gd, ma site na arụmụka gị nke a nwere ike ịchọta naanị n'ihe gbasara iwu na mitzvos nke megidere omume ọma. Iwu dị ka ịgụgharị Shema adịghị emegide omume ọma ya mere ọ dịghị mkpa na a manyere ya na Gd ma ọ bụ na ọ bụ eziokwu halak.
E wezụga nke ahụ, ọ pụrụ ịbụ na ọbụna n’ọnọdụ ndị Chineke nyere iwu ihe yiri omume rụrụ arụ, ọ bụ iji gbochie ikpe na-ezighị ezi ka ukwuu nke omume. Dị ka ihe atụ, okwu gbasara ndị a tara ahụhụ. O doro anya na Chineke nyere iwu igbu anụmanụ na-enweghị isi. Ma ọ ga-ekwe omume na ma e wezụga iwu a, ndị mmadụ gaara ajụ okpukpe kpamkpam n'ihi na ọ garaghị enwe akụkụ dị mkpa na ndụ okpukpe nke bu ụzọ nye Torah. Ya bụ, mgbanwe n’okpukpe ndị Juu dị nkọ nke ukwuu, ọ gaara etinyewokwa n’ihe ize ndụ ka mgbanwe a ghara ime.
Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume na Gd mgbe ụfọdụ na-ebute uche Ya ụzọ (nke a na-amanyeghị Ya) dị ka ihe dị mkpa karịa mmebi omume nke ndị O kere eke. Dị ka ihe atụ, ka anyị were ọchịchọ Chineke ka a kwụọ anyị ụgwọ ọrụ. Ọ bụrụ na n'ihi nke a, o nwere ike imerụ mmadụ ahụ́ mgbe ụfọdụ site n'ihe ndị o kere eke, ọ pụrụ ịdị njikere ime otú ahụ iji kwalite ọchịchọ ahụ, n'agbanyeghịkwa na ọ pụrụ ịkwụsị ọchịchọ ahụ n'oge ụfọdụ, ọ ka na-ebute ya ụzọ dị ka ihe dị mkpa karịa mmebi omume. . Ya bụ, ọ ga-ekwe omume na ọbụna iwu ndị megidere omume adịghị amanye ya ma ọ bụghị eziokwu halak, ma ọ na-ahọrọ inye ha iwu n'ihi na ọ dị ya mkpa karịa mmebi omume. Ma ọ bụrụ na ị na-ekwu na nke a bụ omume rụrụ arụ na-emegide echiche na Chineke mgbe nile omume, m ga-aza na Chineke kwesịkwara omume n'ebe onwe ya. Ya bụ, mgbe ọ hapụrụ uche ya, enwere mmerụ ahụ n'onwe ya (ụdị echiche nke ndụ onye bu ụzọ gị).
20 Adar 03, 2022 - 19/27/XNUMX na XNUMX:XNUMX
N'ezie, arụmụka ahụ na-emetụta naanị iwu megidere omume.
Banyere ndị e merụrụ ahụ, aghọtaghị m ajụjụ ahụ. Ị na-enye nkọwa zuru ezu nke iwu nke àjà. Ọ dị mma. Ma ọ bụrụ na ị pụtara na nke a bụ nkọwa omume na-apụtaghị ìhè, n'echiche m, ọ gaghị ekwe omume.
Mgbe ị na-ekwu na ọ dị ihe ka ya mma, ọ pụtara na o nwere ihe mgbaru ọsọ ụfọdụ na-abụghị nanị n'ihi uche Chineke.
20 Adar 03, 2022 - 19/47/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Banyere àjà, m pụtara na e nwere iwu ndị yiri ka anyị na-emegide omume, ma n'ezie na ha omimi ha na-akwalite omume. Anyị adịghị aghọta otú ma ọ bụ ihe mere ma e nwere ike a miri nkọwa n'azụ ha na-eme ka nkwalite nke omume (ọ bụghị ihe niile megidere omume iwu bụchaghị otú, ma ọ dịghị ihe ọzọ ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịbụ).
N'ihe banyere ụzọ n'anya ya, m pụtara na "onwe" ọchịchọ na ọchịchọ nke Chineke. Ya bụ, ọ bụghị ihe a na-amanye ya site n'èzí, kama uche ya n'ime. Ejighị m n'aka na okwu aka ike dabara adaba ebe a gbasara uche Chineke. Dị nnọọ ka a na-akpọghị ọchịchọ mmadụ ịbụ onye ọkpụkpọ chess agbaziri agbaziri ọchịchọ aka ike (ma ọ bụ na a naghị amanye ya n'èzí). Ọ bụ ọchịchọ onwe onye. Ma eleghị anya, Chineke chọrọ ịbụ “onye ọkpụkpọ chess a gbaara agbaziri” n’otu ubi, maka nke ahụ ọ dịkwa njikere ịchụrụ ụfọdụ ndị ihe ọjọọ n’ụzọ omume mgbe ụfọdụ.
20 Adar 03, 2022 - 23/31/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ị nwere ike.
Ọ na-esiri m ike ikwurịta àgwà na ọchịchọ nke Chineke.
21 Adar 03, 2022 - 00/19/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Anaghị m ekwu maka ndị mmadụ na-eyi egwu n'onwe ha. M na-ekwu na e nwere ike inwe ụfọdụ uche nke Chineke, na ọ bụ ezie na ọ bụghị na-amanye ya si na-enweghị (halakhic eziokwu), ọ ka dị ya mkpa karịa omume mmerụ ahụ o kere eke, ya mere ọ na-enye iwu.
21 Adar 03, 2022 - 07/03/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ọ bụrụ na ọ bụghị na-amanye ya na ọ dịghị ihe ebumnobi na-achị ya mgbe ahụ ọ bụ ya aka ike mkpebi, na draa kushya na duchy. Ma ọ bụ aka ike ma ọ bụ na-amanye (n'echiche bụ na ụkpụrụ omume na-amanye anyị. Ha irè na-amanye, ọ bụghị omume dị ka ha). Anaghị m ahụ ohere nke atọ.
21 Adar 03, 2022 - 11/28/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Onye chọrọ ịbụ onye egwuregwu chess enwetara ikike ọ na-achọsi ike? Ka ọ bụ na-amanye ya?
21 Adar 03, 2022 - 12/39/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Naanị aka ike. Ọ bụrụ na ọ dị n'ime ya, a na-amanye ya.
21 Adar 03, 2022 - 14/56/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Enwere ihe gbasara nzuzo nke ọrụ ahụ mkpa dị elu na ọchịchọ nke Chineke ịkwụ ụgwọ. Na abụọ, Chineke chọrọ ka anyị nweta ihe mgbaru ọsọ ndị a. Iji nweta ihe mgbaru ọsọ ndị a, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na mmadụ ga-emerụ ahụ n'omume. Dịka ụmụ mmadụ na-eme nnwale anụmanụ maka ebumnuche ahụike, ọ ga-ekwe omume na Gd na-eji anyị eme ihe ọ bụrụgodị na mgbe ụfọdụ ọ na-emerụ anyị ahụ maka mkpa Ya.
21 Adar 03, 2022 - 14/59/XNUMX na XNUMX:XNUMX
AHN. Ya mere ọ na-amanye ya. Inweta ụgwọ ọrụ pụtara izu oke karịa, nkọwa nke izu oke adịghịkwa n'aka ya.
21 Adar 03, 2022 - 15/41/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ihe kpatara na a ga-amanye ya n'enweghị mgbagha. O nwere ike họrọ ya. A sị ka e kwuwe, ihe niile dị mkpa ikwu na a na-amanye ya na-abịa site n'ịkọwa na Chineke agaghị ahọrọ ihe rụrụ arụ. Mana enyewo m ihe atụ na ebe ọ dị mkpa, ụmụ mmadụ na-ahọrọkwa ihe rụrụ arụ maka onwe ha na n'ụzọ ziri ezi (nnwale ahụike na anụmanụ)
21 Adar 03, 2022 - 17/02/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ụmụ mmadụ na-eme nke a n'ihi mmanye. Ọrịa na-amanye ha na otú ahụ ka ụzọ ọgwụgwọ.
21 Adar 03, 2022 - 17/46/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ha nwere ike ime nnwale na mmadụ ma ọ bụ hapụ ọgwụ ahụ. Ya bụ, ọ dịghị uru ọ dị mkpa ma ọ bụ eziokwu ọ bụla bara uru nke na-amanye ime nnwale na anụ ọhịa ahụ.
21 Adar 03, 2022 - 18/51/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Enwere eziokwu na a chọrọ nnwale iji mụta, ma enwere eziokwu omume na Shabbat dị elu karịa mmadụ.
21 Adar 03, 2022 - 19/43/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Yabụ kedu ihe mmadụ ga-eji bịa na eziokwu halak nke a manyere Gd. Enwere ike ikwu na enwere eziokwu nke na-ekwu na kama esemokwu dị n'etiti mkpa Chineke na mmebi omume nke ụmụ mmadụ, e nwere eziokwu omume nke na-ekwu na ọ ka mma imerụ mmadụ ahụ karịa imebi mkpa Chineke.
21 Adar 03, 2022 - 19/48/XNUMX na XNUMX:XNUMX
A na-amanyekwa ya mkpa Chineke, ma ọ bụ na ọ dịghị mkpa, ọ dịghịkwa akwado ịjụ ụkpụrụ omume.
N'uche nke m ọ nweghị ụzọ isi na nke a pụta: ma ọ bụ mmanye ma ọ bụ aka ike. Na aka ike adịghị ajụ omume ọma. Oge ọ bụla ị si n'akụkụ dị iche bịa mana azịza ya bụ otu. Ihe mkpuchi ahụ dị mkpụmkpụ, ị nwere ike kpuchie ụkwụ gị ma ọ bụ isi ma ọ bụghị ha abụọ.
21 Adar 03, 2022 - 20/13/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ọ dị mma, mana mkpa abụghị eziokwu halak. Site na ihe m ghọtara n'aka gị eziokwu halakic ma ọ bụ omume bụ eziokwu n'ọhịa nke kwesịrị, ọ bụghị nke bụ.
21 Adar 03, 2022 - 20/54/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ọ nweghị ihe ọ mere. A ka nwere ihe ndị a manyere ya. Mana gafere nke ahụ, mkpa a bụ eziokwu na-emepụta OUGHT. Arụmụka bụ na a na-amanye iwu n'isi ya dị ka ụkpụrụ omume. Ọ naghị adị m mkpa ma ọ bụ mmanye site na eziokwu na mkpa ma ọ bụ ozugbo. M ka na-eche na ndị a bụ ụkpụrụ, ma gịnị kpatara o ji dị mkpa ?!
21 Adar 03, 2022 - 21/07/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Nke a bụ ihe m rụrụ ụka na nzaghachi mbụ. Na eziokwu nke mkpa a na-emepụta ihe, ma ọ bụ site n'ógbè nke omume ọ bụghị site n'ógbè nke halakhic ma ọ bụ ihe ọzọ. Dị nnọọ ka nnwale a na-eme n’anụmanụ ọ bụghị n’ahụ́ ụmụ mmadụ si kwesị ekwesị n’omume ma emeghị m.
21 Adar 03, 2022 - 21/12/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ọ bụchaghị omume. Ụfọdụ chọrọ ma ọ bụ uru, omume ma ọ bụ na ọ bụghị. Dị ka ihe atụ, ọzụzụ Chineke abụghị mkpa omume n’ụzọ nkịtị. Ọbụna mmachibido iwu iri anụ ezi adịghị ka ngosipụta nke eziokwu omume.
21 Adar 03, 2022 - 21/19/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ihe m bu n’uche bụ na Chineke na-enye iwu megidere omume ọma n’ihi mkpa ụfọdụ dị na Ya. Mana tupu o nye iwu, ọ nọ n'ọgba aghara ma ọ ga-ebute mkpa ya ụzọ, ma ọ bụ iji zere mmerụ ahụ n'omume nye ụmụ mmadụ. Ihe isi ike a dị na mpaghara omume. Dị nnọọ ka ihe isi ike nke ma a ga-eme nnwale na mmadụ ma ọ bụ anụmanụ dị na ọnọdụ omume.
21 Adar 03, 2022 - 21/32/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ya mere, enwere uru okpukpe (nke ị na-ahọrọ ịkpọ ihe dị mkpa) nke a na-amanye ya, na naanị mkpebi dị n'ime nsogbu dị n'etiti ya na omume bụ mkpebi ziri ezi. Ka e were ya na i kwuru eziokwu, gịnịzi? Ebee ka esemokwu dị? E wezụga nke ahụ, n'echiche m, mkpebi n'etiti uru okpukpe ma ọ bụ mkpa na ụkpụrụ omume abụghị n'onwe ya na ọkwa omume.
22 Adar 03, 2022 - 10/57/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Dị ka m maara, Rabbi Michi na-ekwu nke a:
A. Chineke chọrọ ihe ọma n’ihi na ọ dị mma
B. Usoro okpukpe na usoro omume abụghị otu
nke atọ. Na esemokwu n'etiti usoro okpukperechi na usoro omume, a ga-ahọrọ usoro omume mgbe ụfọdụ
Gịnị ma ị na-ekwu na esemokwu ahụ bụ nanị ihe e chepụtara echepụta (dị ka ọ dị n'ụzọ nke Rabbi Lichtenstein na-akwadokwa àgwà a na-enwe n'ógbè okpukpe)?
D. Ọ bụ nghọta m na ọ bụ ezie na usoro okpukpe na-amanyekwa Chineke, ma ọ bụghị ya, gịnị kpatara o ji enye iwu megidere omume?
Ihe a ka ga-aghọta bụ ihe mere e ji kwe ka anyị na-ahọrọ ụkpụrụ omume ma ọ bụrụ esemokwu, ebe ọ bụ na Chineke họọrọ usoro okpukpe na esemokwu ahụ?
Ihe ngwọta nwere ike ime bụ na Chineke nyere iwu okpukpe, ma ọ bụ ezie na ọ kwụsịrị na nche ya, anyị na-eche na n'eziokwu na ọ bụghị onye mitzvah, ya mere họrọ usoro omume.
Ihe a niile dị ka usoro ọgụgụ isi nke nwa anyị nwoke, bụ Ramad Shlita, kwesịrị ntụkwasị obi na usoro ya nke na-adịghị aghọta nhọrọ nke uche Chineke (ma hụ sayensị nke nnwere onwe). Na doc na il.
22 Adar 03, 2022 - 14/06/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ọ bụrụ na ị na-agụ okwu nke onye amamihe nke ike gị, ị ga-ahụ na m na-ede na anyị na-adịghị ekwe, kpọmkwem n'ihi na ya onwe ya ahọrọla. Ya mere ọ dịghị mkpa ịchọ ngwọta.
Na Adar 23, 03 - 2022/14/16 na XNUMX:XNUMX
Nke a pụtara na o nweghị njirimara dị n'etiti halakhah na ụkpụrụ omume . Ndị a bụ edemede abụọ na-adabere na ụkpụrụ (ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile na-emegiderịta onwe ha n'ezie). Ikpe ikpe ma omume ọ bụ omume ma ọ bụ na ọ bụghị, na ikpe ma ọ ga-ekwe omume ma ọ bụ machibido iwu halakhically bụ abụọ dị iche iche na fọrọ nke nta ka nnwere onwe. Ụdị halakhic na omume bụ ụdị abụọ dị iche iche. N'ezie n'ọnọdụ ebe enwere esemokwu n'etiti nkuzi omume na nke halakhic mgbe ahụ, a ga-ekpebi ya n'ụzọ ụfọdụ (na nke a abụghị mgbe niile na-akwado halakhic), mana ịdị adị nke esemokwu abụghị nsogbu n'onwe ya. E nwekwara esemokwu dị otú ahụ n'etiti ụkpụrụ omume abụọ (dị ka n'ihe atụ nke ịzọpụta ndụ site na ịkpata mgbu), ọ dịghịkwa agọnahụ na a ga-enwekwa uru halakhic na ụkpụrụ omume.
Kwuo okwu sitere na kọlụm 15. na okwu gị gbasara ndị mmekọ nwoke na nwanyị na mkparịta ụka London. Ọ̀ bụ na ha abụghị ndị nkụzi bụ́ ndị na-adịghị edebe ụkpụrụ okpukpe mgbe ụfọdụ? Biko ị nwere ike ịkọwara m ihe dị iche?
Na Adar 23, 03 - 2022/14/43 na XNUMX:XNUMX
Agwara m nke a na mmalite nke akwụkwọ nke atọ na trilogy. Na nkenke, mgbe enwere nnukwu esemokwu iwu na-emeri mgbe niile. Dị ka ihe atụ, ndị Amalek. Torah n'onwe ya tụlere ọnụ ahịa omume ma nye ya iwu. Ma mgbe esemokwu ahụ bụ ihe mberede, dị ka njikwa uche na Shabbat, ọ gaghị ekwe omume ịwepụ na iwu nke Shabbat na ọ jụrụ Pikun ma ọ bụ ọzọ. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, ị ​​ga-emere onwe gị mkpebi.
Na ihe niile a mgbe iwu doro anya na Torah. Ọ bụrụ na ọ bụ nsonaazụ nke nkọwa ma ọ bụ okwuchukwu, obi abụọ na-abata ebe a na iwu a ezighi ezi.
Na Adar 23, 03 - 2022/14/27 na XNUMX:XNUMX
M na-ekwubu na mkparịta ụka gbasara echiche ndị dị iche n'okpukpe ndị Juu, na echiche gị bụ na n'okwu a ka a ga-ahọrọ ụkpụrụ omume n'elu Torah, megidere Rabbi Riskin onye na-eme okimata na Torah, na ndị rabaị omenala ndị na-eme okimata n'omume. na omenala Israel Torah.
Naanị, enwere m obi ụtọ na ị mere ka echiche m doo anya. N'ihe banyere halakhah Daurite doro anya nke na-emegide omume ọma, enwere ebe ịhọrọ omume? Kedu maka Halacha Durban? Emeela Okimata ka ọ bụrụ Dauriyta halakhah n'ụzọ na-emegideghị omume ọma, ọbụlagodi na-emegide ọdịnala halak?
Na Adar 23, 03 - 2022/14/44 na XNUMX:XNUMX
Akọwara m. Dị ka mgbaasị n'ezie ọ ga-ekwe omume. E kpọchieghị ọnụ ụzọ ntụgharị.
27 Adar 03, 2022 - 14/54/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ajụjụ na-emeghị ihe ọjọọ. Eziokwu ahụ bụ na e nwere omume ziri ezi (Chineke, dịka ọmụmaatụ) - ebe e debanyere ụkpụrụ omume a? Ànyị si n'uche anyị pụta na e kwesịghị ịhapụ igbu ọchụ na izu ohi? Ya bụ, ọ bụrụ na ọ bụ ihe a na-amụta n’echiche mmadụ ma ọ bụ site na mgbakọ ọdịnala, mgbe ahụ ọ bụghịzi ịmanye onye na-anabataghị echiche ahụ. Ma ọ bụrụ na o nwere ihe jikọrọ ya na Torah, ọzọkwa, ọ bụ iwu Chineke edere, oleekwa ihe dị iche n'etiti Torah na omume?
27 Adar 03, 2022 - 15/30/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Edewo ya na mbadamba nkume nke obi anyị. Torah na-akuziri anyị na i mewo ihe ziri ezi na ihe ọma, ma ọ kọwapụtaghị anyị ihe ọ pụtara. Ọ na-eche na onye ọ bụla ghọtara ihe ụkpụrụ omume pụtara (e dere na mbadamba nkume nke obi ya). A na-amụta ọdịnaya nke omume site n'echiche nke omume, mana ọrụ ịgbaso ya bụ site n'uche nke Chineke. Dị ka m kọwara na kọlụm. Ọ bụrụ na o nwere onye na-enweghị echiche a, ọ bụ onye na-arịa ọrịa, ọ nweghịkwa ihe jikọrọ ya na ya. Dịka ọ nweghị ihe jikọrọ ya na onye ìsì na-adịghị ahụ ụzọ.
Ihe dị iche n'etiti halakhah na omume dị n'iwu ahụ. Iwu ndị dị na Torah na-ekwu banyere naanị Halacha, na omume adịghị n'okpuru iwu. Ọ bụ uche Chineke na-enweghị iwu ya mere ọ na-anọgide na-abụghị iwu. Ya mere, ọdịnaya ya adịghị apụta na Torah kama n'ime anyị. N'aka nke ọzọ, na Halacha, a na-edekwa ihe ndị dị n'ime ya na Torah. Ya mere, "na ị mere ihe ziri ezi na ezi" adịghị etinye na ọnụọgụ nke mitzvos na nke ọ bụla n'ime ọha mmadụ.
27 Adar 03, 2022 - 15/37/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ya bụ, enwere echiche na "ịkwụwa aka ọtọ na ịdị mma" bụ ihe mmadụ ọ bụla na-aghọta n'echiche ya bụ isi, ya bụ, ihe ndị anyị na-anabata dị ka igbu ọchụ na ndina n'ike, mana otu ajụjụ ahụ ị jụrụ ndị na-ekweghị na Chineke - gịnị ka ị ga-ekwu maka ya. onye na-anya ahịa nke chere na ụkpụrụ ọrụ ya bụ igbu ọchụ. Ihe akaebe na e nwere usoro omume nke mpụga nke mmadụ, Chineke, ma ọzọ, usoro a adịghị akọwa ihe gụnyere na "ezi omume na ịdị mma," ọzọ, anyị ga-ajụ gị ihe ị ga-ekwu banyere onye mercenary nke kwenyere na igbu ọchụ bụ. ezi omume na ịdị mma. Na nkenke, ọ ga-amasị m ịmegharị nsogbu ị na-edozi na echiche na omume chọrọ Chineke.
27 Adar 03 2022 - 16/19/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Ị na-agwakọta ụgbọ elu. Ajụrụ m ajụjụ ọ bụghị banyere onye na-aghọtaghị na igbu ọchụ bụ ihe a machibidoro iwu mana onye ghọtara na a machibidoro ya iwu ma ọ naghị eche na ọ kwadoro ya. Nke a bụ ajụjụ dị iche kpamkpam. Onye na-aghọtaghị kpuru ìsì. Gịnị ka m ga-agwa ya? Nke pụtara maka ndị ìsì ndị na-adịghị ahụ eziokwu ma na-agọnahụ ịdị adị nke agba dịka ọmụmaatụ.
Ihe m jụrụ ha bụ ihe bụ isi iyi nke izi ezi maka omume ọ bụghị ihe iwu nke omume na-ekwu.
Na-enweghị Chineke mụ onwe m, n'ihi na ọ na-eche na iwu nke omume ziri ezi, agaraghị ejikọta ya. M ga-eleghara mmetụta a anya dị ka ihe efu ghọtara na m na ọ nweghị ezi nkwado. Naanị Chineke nwere ike inye ya nkwado.
27 Adar 03 2022 - 16/25/XNUMX na XNUMX:XNUMX
Aghọtara m. Ị na-ekwu n'ụzọ doro anya na ihe gụnyere n'omume - ọ bụ onye ọ bụla maara, ọ bụ ihe dị n'ime anyị na igbu ọchụ na idina mmadụ n'ike bụ omume rụrụ arụ. Ị na-arụkwa ụka n'ụzọ bụ isi na ụkpụrụ omume a dị n'isi ga-abụrịrị nke onye ọ bụla nabatara, n'agbanyeghị mgbanwe nke omenala na oge. Ihe dị iche n'etiti onye na-ekweghị na Chineke na onye kwere ekwe bụ na onye kwere ekwe kọwakwara ihe mere omume a ji manye ya. Aghọtara m ya nke ọma?
27 Adar 03 2022 - 16/26/XNUMX na XNUMX:XNUMX
kpọmkwem otú ahụ. Echere m na m kọwara nke a na ma kọlụm na mkparịta ụka mbụ.
27 Adar 03 2022 - 16/33/XNUMX na XNUMX:XNUMX